Natagpuan 1330 ~ Mateu, Mako, Ruka, John, Mabasa, VaRoma, 1 VaKorinte, 2 VaKorinte, VaGaratiya, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, 1 VaTesaronika, 2 VaTesaronika, 1 Timoti, 2 Timoti, Titu, Firimoni, VaHebheru, James, 1 Petro, 2 Petro, 1 Johani, 2 Johani, 3 Johani, Judha, Zvakazarurwa
Regai kuzvifurira muchiti zvatina Abhurahamu sababa vedu muchechetere, nokuti ndinoti kwamuri, Mwari anogona kumutsira Abhurahamu vana kubva kumatombo aya.
Muedzi akauya akati kwaari, “Kana uri Mwanakomana waMwari iti matombo aya ave chingwa.”
Asi iye akapindura achiti, “Zvakanyorwa zvichinzi, ‘Munhu haararami nechingwa choga asi neizwi rose rinobuda mumuromo maMwari.’ ”
“Kana uri Mwanakomana waMwari zviwisire pasi nokuti zvakanyorwa zvichinzi, ‘Achaudza vatumwa vake kuti vakuchengete, vachakugama mumaoko avo kuti urege kugumburwa rutsoka rwako nebwe.’ ”
Jesu akati kwaari, “Zvakanyorwazve kuti, ‘Usaedze Tenzi Mwari wako.’ ”
Jesu akati kwaari, “Ibvapo! Satani nokuti zvakanyorwa zvichinzi, ‘Unofanira kugwadamira uchinamata Tenzi Mwari wako. Iye oga ndiye waunofanira kushandira.’ ”
Asi ini ndinoti kwamuri usambopika zvako naTenzi kana nedenga nokuti chigaro choumambo chaMwari; kana kupika nenyika nokuti chitambarariko chetsoka dzake;
Vakabva vazhamba vachiti, “Unei nesu, Mwanakomana waMwari. Wauya kuzotirwadzisa here nguva isati yasvika.”
Ipapo dzimwe nyanzvi dzomutemo dzakati, nechomumwoyo, “Munhu uyu ari kushonha Mwari.”
Gungano riya parakazviona rakatya rikarumbidza Mwari akanga apa simba rakadaro kuvanhu.
Mwanakomana womunhu akauya achidya uye achinwa.’ Vanhu vakati, ‘Tarisai muone munhu uyu ane nhafu uye chidhakwa neshamwari yavateresi navatadzi.’ Asi ungwaru hunopembedzwa namabasa aho.”
kuti akapinda mumba maMwari akadya chingwa chakanga chakasumwa kuna Mwari chaakanga asingabvumirwi, pamutemo, uye navakanga vainaye kuti vadye kusiya vapristi bedzi.
Vaya vaiva mugwa vakamugwadamira vachiti, “Zvechokwadi imi muri Mwanakomana waMwari.”
Jesu akavapindura achiti, “Ko imi munodarikirei mutemo waMwari nokuda kwamagamuchidzanwa enyu?
Nokuti Mwari, akati, ‘Remekedza Baba naamai vako uye kuti munhu anotaura zvakaipa nezvababa kana amai vake anofanira kuti afe.’
Asi imi munoti, kana munhu akataurira baba vake kana amai vake achiti, ‘Zvandakanga ndichigona kuzokubatsirai nazvo ndazvipira kuna Mwari, haazosungirwa kuremekedza baba vake.’
Saizvozvo nokuda kwamagamuchidzanwa enyu, makaita kuti shoko raMwari rishaye maturo.
zvokuti gurusvusvu riya ravanhu rakashamiswa, pavakaona mbeveve dzichitaura, zvirema zvaita zvakanaka nemhetamakumbo dzavakufamba namapofu avakuona. Vakarumbidza Mwari wavaIsiraeri.
Simoni Pita akapindura achiti, “Ndimi Kristu chaiye Mwanakomana waMwari mupenyu.”
Pita akamutora ndokutanga kumutsiura achiti, “Mwari haangadaro Tenzi. Hazvimbofa zvakaitika kwamuri izvi.”
Jesu akatendeuka akati kuna Pita, “Ndibvirepo, Satani! Uri chipinganidzo, nokuti hausiri kudivi kwaMwari, asi kudivi kwavanhu.”
Naizvozvo havachisiri vaviri asi vava nyama imwechete. Naizvozvo chinenge chabatanidzwa naMwari ngachirege kuparadzaniswa nomunhu.”
Ndinotizve kwamuri, zvirinyore kuti nghamera ipinde napaburi retsono panokuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari.”
Jesu akavatarisa akati kwavari, “Kuvanhu, izvi hazvigoneki asi pana Mwari zvinhu zvose zvinogoneka.”
Asi iye akapindura mumwe wavo achiti, “Shamwari, handisi kukutadzira. Hauna kubvumirana neni here mubayiro wemari yedhenari?
Jesu akapinda muTemberi yaMwari akadzinga vakanga vachitengesa nokutenga muTemberi. Akapidigurira pasi tafura dzavanhu vokutsinhanisa mari nezvigaro zvaavo vaitengesa hangaiwa.
Pakati pavaviri ava ndoupi akaita zvaidiwa nababa vake?” Ivo vakati, “Wokutanga.” Jesu akati kwavari, “Zvechokwadi, ndinoti kwamuri, vateresi nepfambi vachakutangirai kupinda muumambo hwaMwari.
Naizvozvo, ndinoti kwamuri umambo hwaMwari muchahutorerwa huchipiwa kuno rudzi runobereka muchero yaho.”
Akati kwaari, ‘Shamwari, wapinda seiko muno usina hanzu yomuchato?’ Akabva aomerwa nerokutaura.
Vakatuma kwaari vadzidzi vavo pamwechete nevechikwata chokwaHerodhi vachiti, “Mudzidzisi, tinoziva kuti muri munhu ari pachokwadi uye kuti munodzidzisa gwara raMwari zviri pachokwadi musingatyi munhu nokuti hamunei nechigaro chino munhu.
Vakati, “NdezvaSiza.” Iye ndokuvati, “Ipai zvaSiza kuna Siza, mupewo zvaMwari kuna Mwari.”
Jesu akavapindura achiti, “Munokanganisa, nokuti hamuzivi Magwaro Matsvene uye simba raMwari.
Pane zvokumuka kwavakafa hamuna kuverenga here zvakataurwa naMwari kwamuri achiti,
‘Ndini Mwari waAbhurahamu naMwari Isaki, naMwari Jakobho. Haasi Mwari wavakafa asi Mwari wavapenyu?’ ”
Uyowo anopika nedenga, anopika nechigaro chaMwari choumambo uye anopikawo naiye anogara pachiri.
Jesu akati kwaari, “Shamwari, ingoita zvawavinga.” Vakabva vauya vakati Jesu dzvi kumubata.
“Munhu uyu akati ndinokwanisa kupaza Temberi yaMwari ndichiivaka namazuva matatu.”
Asi Jesu akaramba akanyarara. Mupristi mukuru akati kwaari, “Ini ndinoti pika naMwari mupenyu utiudze kuti ndiwe Mesia here Mwanakomana waMwari?”
Ipapo mupristi mukuru akabvarura hanzu dzake ashatirwa achiti, “Ashonha Mwari. Tichadirei zvapupu? Manzwa moga kushonha kwake Mwari.
musoro vachiti, “Ndiweka unogona kuputsa Temberi uchiivaka namazuva matatu, chizviponeseka kana uri Mwanakomana waMwari buruka pamuchinjikwa.”
Anovimba naMwari. Ko iye Mwari ngaachimuponesaka kana achimuda nokuti akati, ‘Ndiri Mwanakomana waMwari.’ ”
Neawa inenge yechitatu masikati Jesu akadaidzira nezwi guru achiti, “Eri Eri rama sabhakitani” zvinoreva kuti, “Mwari wangu Mwari wangu mandisiireiko.”
Heko kundengendeka kukuru kwenyika kwakaitika nokuti mutumwa waMwari akaburuka kubva kudenga. Akauya akakungurutsa dombo riya ndokugara pamusoro paro.
Uku ndiko kutanga kweShoko Rakanaka raJesu Kristu, Mwanakomana waMwari,
Kuzoti Johani asungwa, Jesu akaenda Garirea kundoparidza Shoko Rakanaka raMwari
achiti, “Nguva iya yazokwana zvino, umambo hwaMwari hwava pedyo. Chipindukai mutendhe Shoko Rakanaka.”
achiti, “Ko, tinei newe Jesu weNazareti? Wauya kuzotiparadza here? Ndinokuziva kuti ndiwe ani, ndiwe Mutsvene waMwari.”
“Ko, seiko uyu achitaura achidai? Ari kushonha Mwari! Ndiani angagone kuregerera zvitadzo kunze kwaMwari oga?”
Pakarepo munhu uya akati kwanyanu kusimuka, akatora rukukwe rwake akabuda vose vachiona, zvokuti vose vakashamiswa, vakarumbidza Mwari vachiti, “Aiwaiwa, hatisati tamboona zvakadai kwete.”
kupinda kwaakaita mumba yaMwari, apo Abhiyatari akanga ari mupristi mukuru akadya zvingwa zvakasumwa kuna Mwari, zvisingabvumirwi kudyiwa naani zvake kunze kwavapristi voga akapawo vaaiva navo?”
Uye mweya yakaipa payaingomuona yaizviwisira pasi pamberi pake ichidaidzira ichiti, “Iwe, uri Mwanakomana waMwari.”
“Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvitadzo zvose nokushonha Mwari kwose kunoregererwa vanhu.
Ani naani anoita kuda kwaMwari ndiye mukoma nomunun'una neni, ndiye hanzvadzi naamai vangu.”
Iye ndokuti kwavari, “Imi makapiwa zvakavanzika zvoumambo hwaMwari asi kune vokunze zvose zvinopiwa nemienzaniso, kuti,
Akatizve, “Umambo hwaMwari hwakadaizvi, hwakaita somunhu anomwaya mbeu muvhu.
Akatizve, “Umambo hwaMwari tingauenzanise neiko? Uye tingahufananidze nomuenzanisoiko?
ndokuzhamba nezwi guru achiti, “Unei neni, Jesu Mwanakomana waMwari Wokumusorosoro. Ndinoti nezita raMwari rega, kunditambudza.”
“Munokanda pasi murao waMwari kuti muti dzvemere namagamuchidzanwa etsika dzavanhu.”
Akatizve kwavari: “Makanyatsozviwanira nzira yokunzvenga nayo murao waMwari kuti muwane machengetero amagamuchidzanwa etsika dzenyu,”
Asi imi munoti, “Kana munhu akati kuna baba kana kuna amai vake, ‘Chinhu chandingadai ndakuyamurai nacho chave Korobhani’ (zvichireva kuti chipo chasumwa kuna Mwari),
Nokudaro munoita kuti shoko raMwari rive chinhu pasina, pamusana pamagamuchidzanwa etsika dzenyu amunogamuchidzana; munoitawo zvimwe zvizhinji zvakafanana nezvizvi.”
noupombwe, noruchiva nomwoyo wakaipa, nounyengedzi nokusazvibata, neshanje, nokushonha Mwari nokuzvikudza noupenzi.
Jesu akatendeuka akaona vadzidzi vake ndokubva atsiudza Pita achiti, “Ndibvirepo, Satani womunhu! Mafungiro akadai haasi aMwari asi avanhu.”
Akazoti kwavari, “Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kune vamwe vamire pano vasingambofi vasati vaona umambo hwaMwari hwatouya nesimba.”
Kana ziso rako richikurasisa, risvukunure, zviri nani kuti upinde muumambo hwaMwari une ziso rimwechete pano kukandwa mugomba romoto, uina maziso maviri,
Asi kubva pakutanga kwokusikwa kwezvinhu, Mwari wakavasika vari munhurume nomunhukadzi.
Naizvozvo chabatanidzwa naMwari ngachirege kuparadzaniswa nomunhu.”
Asi Jesu paakazviona akatsamwa ndokuti kwavari, “Regai vana vaduku vauye kwandiri musavarambidze nokuti umambo hwaMwari ndehwevakaita saivava.
Chokwadi chaizvo, ndinokuudzai kuti ani naani asingagamuchiri umambo hwaMwari somwana muduku haazombohupinda.”
Jesu akamupindura achiti, “Seiko uchinditi ndakanaka? Hakuna wakanaka kunze kwaMwari oga.
Jesu akaringa — ringa akati kuvadzidzi vake, “Zvakaoma sei kuti vanoupfumi vapinde muumambo hwaMwari!”
Vadzidzi vakashamiswa kwazvo namazwi ake. Asi Jesu akataurazve achiti kwavari, “Vakomana, zvakaoma sei kupinda muumambo hwaMwari.
Zviri nyore kuti ngamera ipinde napaburi retsono pano kuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari.”
Jesu akavatarisa akati, “Izvi hazvigoneki kuitwa navanhu asi naMwari. Kuna Mwari zvose zvinogoneka.”
Jesu ndokuvapindura achiti, “Ivai nechitendero muna Mwari.
Vakasvikoti kwaari, “Mudzidzisi, tinoziva kuti muri munhu ari pachokwadi, uye kuti hamunei nezvokuti uyu ndiani zvakare hamunei nezvokuti akamira sei, asi munodzidzisa gwara raMwari zviri pachokwadi. Ko, zviri pamutemo here kutera mutero kuna Siza, kana kuti kwete? Totera here kana kuti torega kutera?”
Jesu akavati, “Ipai zvaSiza kuna Siza, zvaMwari kuna Mwari.” Vakashamiswa naye zvikuru.
Jesu akati kwavari, “Hazvisizvo here zvinoita kuti murasike zvokuti hamuzivi Magwaro kana simba raMwari?
Kana zviri zvokumutswa kwavakafa, hamuna kuverenga here muGwaro raMosesi paya pezvegwenzi riya, zvokuti Mwari akamutaurira achiti, ‘Ini ndini Mwari waAbhurahamu, naMwari waIsaki, naMwari waJakobho?’
Haasi Mwari wavakafa asi wavapenyu. Munokanganisa chaizvo.”
Jesu akapindura achiti, “Mutemo wechiposhi — poshi ndouyu unoti; “ ‘Chinzwa Isiraeri, Tenzi Mwari wedu ndiye Tenzi mumwe chete oga.
Uye ida Tenzi Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nepfungwa dzako dzose, nesimba rako rose.’
Zvino nyanzvi yoMutemo iya yakamuti, “Ndizvozvo chaizvo, Mudzidzisi, mataura sezvazviri kuti kuna Mwari mumwe chete, kunze kwake hakuna mumwezve.
Jesu paakanzwa kuti apindura noungwaru akamuti, “Hausiri kure noumambo hwaMwari.” Kubva ipapo hapana naakazoshinga kumubvunza kana mumwe mubvunzo zvawo.
Nokuti pamazuva iwayo pachava nenhamo isati yamboitika kubvira pakutanga kwokusikwa kwezvinhu zvakasikwa naMwari kusvika pari nhasi, uye hazvichazomboitikazve.
Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handichazonwizve waini yomugirepisi kusvikira zuva randichanwa yava waini itsva muumambo hwaMwari.”
Manzwa kushonha kwake Mwari. Munotii nazvo?” Vose vakati, “Ane mhosva, anofanira kuti afe.”
Neawa yechitatu yamasikati Jesu akadaidzira nezwi guru achiti, “Eroi, Eroi, rama sabhakitani?” Zvinoreva kuti, “Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyireiko?”
Kuzoti mutungamiri wezana akanga amirepo akatarisana naye aona kufa kwaakaita akati, “Zvechokwadi munhu uyu anga ari Mwanakomana waMwari.”
Kuzoti Jesu apedza kutaura kwavari akakwidzwa kudenga kwaakandogara kurudyi rwaMwari.
Vakanga vakarurama pamberi paMwari vose vari vaviri, vasina chinoshoreka pakutevedza zviri pamitemo nepamirao yaTenzi.
Zvino Zakariya zvaakanga achiri kuita basa roupristi pamberi paMwari,
Achazodzorera vazhinji vavaIsiraeri kuna Tenzi Mwari wavo.
Mutumwa akamuti, “Ndini Gabhurieri, ndinomira pamberi paMwari, ndatumwa naTenzi kuti nditaure newe nokukuparidza shoko iri rakanaka.
Nomwedzi wechitanhatu, Mwari akatuma mutumwa Gabhurieri kuguta reGarirea rinonzi Nazareti,
Mutumwa waMwari ndokupindura oti, “Usatye zvako Maria, nokuti Mwari afadzwa zvake newe.
Iye achava mukuru — mukuru uye achanzi Mwanakomana woWokumusorosoro. Tenzi Mwari achamupa chigaro choumambo chababa vake Dhavhidhi.
Nokuti pana Mwari hapana chisingagonekwi.”
Pakarepo muromo Zakariya wakabva wazaruka, rurimi rwake rukabva rwasununguka, ndokubva avakutotaura achirumbidza Mwari.
“Ngaarumbidzwe Tenzi Mwari wavaIsiraeri, nokuti akashanyira vanhu vake, akavanunura;
pamusana petsiye nyoro dzaMwari wedu, apo tichabudirwa neZuva richibva kumusoro,
Anasi naKaifasi vari vapristi vakuru, shoko raMwari rakasvika kuna Johani mwanakomana waZakariya, ari mugwenga.
Vanhu vose vachaona ruponeso rwaMwari.’ ”
Naizvozvo berekai michero inowirirana nokupinduka kwenyu, uye musavambe kuzviti, ‘Tina Abhurahamu sababa vedu, nokuti ndinoti kwamuri, Mwari anogona kumutsira Abhurahamu vana kubva kumatombo aya.
mwanakomana waEnosi, mwanakomana waSeti, mwanakomana waAdhamu, mwanakomana waMwari.
Satani akati kwaari, “Kana uri Mwanakomana waMwari iti ibwe iri rive chingwa.”
Jesu akamupindura achiti, “Zvakanyorwa zvichinzi, ‘Unofanira kugwadamira uchinamata Tenzi Mwari wako, umushandire iye oga.’ ”
Akamutungamidzazve oenda naye Jerusaremu akandomumisa pachisuvi cheTemberi ndokumuti, “Kana uri Mwanakomana waMwari, zviwisire pasi uchibva pano,
nokuti zvakanyorwa zvichinzi; ‘Mwari achaudza vatumwa vake kuti vakuchengete vachikudzivirira,’ uyezve
Jesu akamupindura achiti, zvakanzi, “Usaedze Tenzi Mwari wako.”
“Aa! Ko tinei newe Jesu weNazareti? Wauya kuzotiparadza here? Ndinokuziva; kuti ndiwe ani; ndiwe Mutsvene waMwari.”
Asi Jesu akati kwavari, “Ndinofanira kuparidzawo shoko rakanaka roumambo hwaMwari kuna mamwe maguta nokuti ndizvo zvandakatumirwa.”
Vanhu zvavakanga vachiti unga — unga padyo naJesu vachida kunzwa shoko raMwari, iye akanga akamira pamahombekombe egungwa reGenesareti.
Nyanzvi dzoMutemo navaFarisei vakatanga kufunga vachiti, “Ndianiko uyu anotaura achishonha Mwari? Ndiani angagone kuregerera zvitadzo kunze kwaMwari oga?”
Pakarepo munhu uya akabva asimuka vose vachizviona, ndokutora chaakanga avete chiya ndokuenda kumusha achirumbidza Mwari.
kuti akapinda mumba yaMwari akatora zvingwa zvakasumwa kuna Mwari akazvidya akapawo vaaiva navo kunyange zvisingabvumirwi kudyiwa naani zvake kusiya vapristi voga?”
Pamazuva iwayo Jesu akabuda akaenda kugomo kundonamata. Akapedza usiku hwose achinamata kuna Mwari.
Jesu akaenda navo. Kuzoti ava padyo neimba iyoyo, mutungamiriri wezana akatuma shamwari kwaari achiti, “Tenzi musazvinetse henyu, nokuti handikodzeri kuti mupinde mumba mangu,
“Ndinoti kwamuri, pavanhu vose vakazvarwa navakadzi hakuna mukuru kupinda Johani. Zvakadaro zvazvo muduku wokupedzisira muumambo hwaMwari mukuru kwaari.”
Pakunzwa izvi, vanhu vose navateresiwo vakapembedza ururami hwaMwari nokuombekwa kwavakanga vaitwa noruombeko rwaJohani.
Asi vaFarisei nenyanzvi dzoMutemo nokusaombekwa kwavo naJohani, vakaramba zvakarongwa naMwari pamusoro pavo.
Mwanakomana womunhu akauya achidya uye achinwa, moti munhu uyu ane nhafu uye chidhakwa neshamwari yavateresi navatadzi.”
Mushure maizvozvi Jesu akaenda nomumaguta nomumisha achiparidza nokushumaira Shoko Rakanaka roumambo hwaMwari. Akanga aina vane gumi navaviri vaya
iye akati, “Imi zvenyu makapiwa ruzivo rwezvakavandika zvoumambo hwaMwari asi kuna vamwe inongova mienzaniso kuti kutarisa vatarise zvavo asi vasingaoni, uye kunzwa vanzwe zvavo asi vasinganzwisisi.”
Izvi ndizvo zvinorehwa nomuenzaniso uyu: Mbeu ndiro izwi raMwari.
Asi iye akati kwavari amai vangu navakoma navanun'una vangu ndavavo vanonzwa shoko raMwari vachiita zvarinoreva.
Paakaona Jesu akazhamba akawira pasi pamberi pake ndokudaidzira achiti, “Unei neni Jesu, Mwanakomana waMwari Wokumusorosoro? Ndinokukumbirisa zvangu kuti usandirwadzise.”
“Dzokera kumusha kwako undorondedzera kuti Mwari akakuitira zvakadii.” Nokudaro akaenda achiparidza nomuguta rose kuti Jesu akanga amuitira zvakadii.
Akavatuma kundoparidza umambo hwaMwari uye kundoporesa.
Voruzhinji pavakazvinzwa vakamutevera. Akavagamuchira akataura kwavari nezvoumambo hwaMwari. Akarapa vakanga vachida kurapwa.
Iye ndokuti kwavari, “Ko imi munoti ndini ani?” Pita akapindura achiti, “Ndimi Kristu waMwari.”
Zvirokwazvo ndinoti kwamuri pane vamwe vamire pano vasingambozoravira rufu vasati vaona umambo hwaMwari.”
Vose vakakatyamadzwa noukuru hwaMwari. Pavakanga vachiri kushamiswa kudaro nezvose zvaakaita akati kuna vadzidzi vake.
Asi iye akamuti, “Rega vafi vavige vakafa vavo. Chako iwe kuenda kundoparidza umambo hwaMwari.”
Jesu akati kwaari, “Hakuna munhu anobata gejo asi iye achicheuka shure angakodzere umambo hwaMwari.”
Rapai vanorwara mariri, muti kwavari umambo hwaMwari hwasvika pedyo nemi.
“Kunyange guruva reguta renyu rakanamatira patsoka dzedu tinorikuhumurira imi, zvakadaro zvazvo zivai izvi zvokuti umambo hwaMwari hwaswedera.”
Jesu akati kwavari, “Ndiani wenyu ane shamwari inouya kwaari pakati pousiku yoti kwaari, ‘Shamwari, ndikweretesewo zvingwa zvitatu
nokuti imwe shamwari yangu iri parwendo yasvika, zvino handina chokumuperekera.’
Ndinokuudzai kuti angarege zvake kumuka achimupa chinhu pamusana pokuti ishamwari yake asi pamusana pokugwavarira kwake anotomuka achimupa zvose zvaanoda.
Asi Jesu akati, “Ehe zvazvo, asi vakanyanyokomborerwa avo vanonzwa Shoko raMwari vachirichengeta.”
Asi zvichakuwanai imi vaFarisei nokuti munobvisa chegumi patunhuwo zvatwo twakaita semindi neru netumirio asi imi musina hanya noruenzaniso norudo naMwari. Izvi ndizvo zvamaifanira kunge muchiita musingarege zvenyu kuita zvimwe.
Saizvozvo, Mwari, noungwaru hwake, akati, ‘Ndichavatumira vaporofita navapositori.’ Vamwe vachavauraya vachivatambudza
“Ndinokutaurirai shamwari dzangu kuti, ‘Musatye avo vanouraya muviri asi mushure macho vasina chavanokwanisa kuita.’
Tushiri tudiki tushanu hatutengeswi namasendi maviri here? Asi hapana kana kamwe katwo kanokanganikwa naMwari?
“Ndinokutaurira kuti, ‘Munhu wose anondibvuma pamberi pavanhu, Mwanakomana womunhu achamubvumawo pamberi pavatumwa vaMwari.’
Asi uyo anondiramba pamberi pavanhu, acharambwawo pamberi pavatumwa vaMwari.
Ndizvozvo zvina munhu anozvichengetera upfumi iye asiri mupfumi kuna Mwari.”
Chimbofungai nezvamakunguwo. Haadyari kana kukohwa. Haana hozi kana dura asi Mwari anoapa chokudya. Ko imi munokosha zvakadii kupfuura shiri?
Zvino kana Mwari achipfekedza uswa hupenyu musango nhasi uno asi mangwana acho huchikandwa muchoto, ko kutozoti imi! Anokupfekedzai zvakadii, inga muri vanhu vechitendero chidiki!
Akaisa maoko ake paari. Pakarepo akatwasanudzwa. Akabva arumbidza Mwari.
Jesu akazoti, “Umambo hwaMwari hungafananidzwe nei, ndingauenzanise neiko?
Akatizve umambo hwaMwari ndingahauenzanise nei?
Ikoko vachachema vachirumanidza mazino kana moona Abhurahamu naIsaki naJakobho navaporofita vose vari muumambo hwaMwari asi imi madzingirwa kunze.
Vanhu vachauya vachibva kumabvazuva nokumadokero uye vachibva kuchamhembe nokumaodzanyemba vachizogara pakudya muumambo hwaMwari.
Asi kana wakakokwa enda undogara panzvimbo yapasi pasi kuitira kuti uya akukoka akauya, ati kwauri, ‘Shamwari kwira kumusoro.’ Unobva waremekedzwa pamberi pavanhu vose vagere pakudya newe,
Akataurirawo munhu akanga amukoka achiti, “Kana wagadzira chokudya kana mabiko, rega kukoka shamwari dzako kana vakoma navanun'una vako, kana hama dzako kana kuti vavakidzani vako vapfumi nokuti vangadaro vakazokukokawo uchizoripwa.
Mumwe munhu akanga agere naye pakudya paakanzwa izvi, akati kwaari, “Akakomborerwa zvake achadya zvokudya muumambo hwaMwari.”
Paanosvika kumusha anodaidza shamwari dzake navavakidzani vake ovati, ‘Farai pamwechete neni nokuti ndawana hwai yangu yakanga yarasika.’
Kana aiwana anodaidza shamwari dzake navavakidzani vake achiti, ‘Farai neni nokuti ndawana mari yandakanga ndarasa.’
Saizvozvowo ndinokutaurirai, kuti pachava nokufara kukuru pakati pavatumwa vaMwari kokufarira mutadzi mumwechete anotendeuka.”
Asi iye akapindura baba vake achiti, ‘Tarirai muone kuti kwamakore mazhinji aya ndakakushandirai asi handina kumboramba kukutererai zvamaindiudza. Asi imi hamuna kana kumbondipa kana kambudzana zvako kokuti ndifare neshamwari dzangu.
Ndinokutii, ‘Itai ushamwari muchishandisa mari isina zvayo kururama kuti kana yopera vakugamuchirei mudzimba dzokugara nokusingaperi.
“Hapana muranda anogona kushandira vatenzi vaviri nokuti anogona kuvenga mumwe achida mumwe kana kuti kwati kwati nomumwe achishora mumwe wacho. Haugoni kushandira Mwari uye mari.”
Asi akati kwavari, “Imika ndimi munozviita vakanaka pamberi pavanhu asi Mwari anoziva mwoyo yenyu nokuti chinorumbidzwa navanhu chinosemesa pana Mwari.
“Mutemo navaporofita zvaivapo kusvikira pana Johani. Kubvirawo ipapo Shoko Rakanaka roumambo hwaMwari rinoparidzwa, munhu wosewo ari kuita zvokumanikidzira kupindamo.
Zvaitova nani kuti asungirirwe guyo mumutsipa make achindokandwa munyanza panze pokuti akonzere mumwe wavaduku ava kuti atadzire Mwari.
Zvino mumwechete wavo paakaona kuti arapwa, akadzoka achirumbidza Mwari nezwi riri pamusoro.
Hapana kuwanikwa adzoka kuzorumbidza Mwari kusiya mutorwa uyu oga.”
Jesu paakabvunzwa navaFarisei kuti umambo hwaMwari huchasvika rini, akavapindura achiti, “Umambo hwaMwari hausi kuuya nezviratidzo zvinoonekwa.
Hakuna munhu achati, ‘Hohuno huri pano kana kuti huri apo, nokuti izvozvi umambo hwaMwari huri pakati penyu.’ ”
Akati, “Mune rimwe guta maiva nomutongi akanga asingatyi Mwari kana kuzeza munhu.
Kwechinguva chakati kuti akamboramba. Mushure mezvo akazozviti, ‘Kunyange zvazvo ndisingatyi Mwari kana kuzeza munhu
Mwari haangadzivirire here vasarudzwi vake vanochema kwaari siku nesikati. Angavanonokere kwenguva ndefu here?
MuFarisei akamira akanamata nechomumwoyo achiti, ‘Mwari ndinokutendai nokuti handina kuita savamwe vanhu, vapambi, vasina ruenzaniso, nemhombwe kana somuteresi uyu.
Asi muteresi akamira nechokure asingatomboda kusimudza maziso ake kudenga. Akazvibata pachifuva achizvininipisa achiti, ‘Mwari, ndinzwirewo tsitsi ini mutadzi.’
Chokwadi chaizvo ndinokuudzai kuti ani naani asingagamuchiri umambo hwaMwari somwana muduku haambohupinda.”
Jesu akati kwaari, “Sei uchinditi ndakanaka? Hakuna wakanaka asi Mwari woga.
Jesu akamutarisa akati, “Zvakaoma sei kuti vano upfumi vapinde muumambo hwaMwari.
Zviri nyore kuti ngamera ipinde napaburi retsono panokuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari.”
Asi iye akati, “Zvisingagoneki navanhu zvinogoneka naMwari.”
Iye akati kwavari, “Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ‘Hakuna munhu akasiya musha kana mukadzi kana vakoma kana vaunun'una kana vabereki kana vana pamusana poumambo hwaMwari
Pakarepo akabva avakuona akatevera Jesu achirumbidza Mwari. Vanhu vose pavakazviona vakarumbidza Mwari.
Pavakanga vakateerera zvinhu izvi, akaenderera mberi achivapa muenzaniso nokuti akanga ava pedyo neJerusaremu uye nokuti vakanga vachifunga kuti umambo hwaMwari hwakanga hwava kuda kutoonekwa.
Paakanga ava kuda kusvika kumateru eGomo reMiorivhi mhomho yose yavadzidzi vake yakatanga kupembera ichirumbidza Mwari ichidaidzira, ichirumbidza Mwari nokuda kwamabasa makuru avakanga vaona
Vakamubvunza vachiti, “Mudzidzisi, tinoziva kuti munotaura nokudzidzisa zvazviri uye hamusaruri asi munodzidzisa nzira yaMwari zviri pachokwadi.
Iye akati kwavari, “Nezvo ipai kuna Siza zvaSiza mupewo kuna Mwari zvaMwari.”
nokuti havachafazve pamusana pokuti vanenge vaita savatumwa uye vanenge vava vana vaMwari uye vanenge vava vanhu vokumuka kuvafi.
Asi zvokuti vakafa vanomutswa, kunyange Mosesi akazviratidza mundima iya yegwenzi raipfuta moto maanoti Tenzi ndiMwari waAbhurahamu naMwari waIsaki naMwari waJakobho.
Zvino haasi Mwari wavakafa asi Mwari wavapenyu nokuti kwaari vose vapenyu.”
Muchakwidzwa matare kunyange navabereki venyu kana navakoma navanun'una nehama neshamwari. Vachauraya vamwe venyu.
Naizvozvo kana moona zvinhu izvi zvavakuitika, munobva maziva kuti umambo hwaMwari hwava pedyo.
nokuti, ndinokuudzai kuti handichazochidya kusvikira chazadziswa muumambo hwaMwari.”
nokuti ndinokuudzai kuti kubvira zvino handizonwazve muchero womugirepisi kusvikira umambo hwaMwari hwasvika.”
asi kubvira zvino Mwanakomana womunhu achagara ari kurudyi rwaMwari Samasimbaose.”
Vose vakati, “Saka uri Mwana waMwari nhai?” Iye akati kwavari, “Inga imi matozvireva wani. Kuti ndini iye”
Herodhi naPirato vakava shamwari neshamwari pazuva iroro nokuti vaimbenge vachivengana.
Vanhu vakanga vakamira pedyo vachitarisa. Asi vatongi vakamusveeredza vachiti, “Akaponesa vamwe ko ngaazviponesewoka kana ari iye Mesia waMwari musarudzwi wake.”
Asi mumwe uya akamutsiura achiti, “Hautyi Mwari here? Inga une chirango chimwechetecho naye.
Mutungamiriri wezana ramasoja paakaona zvakanga zvaitika akarumbidza Mwari akati, “Zvechokwadi munhu uyu anga akarurama.”
Iye haana kunge awirirana navamwe pazvinangwa zvavo napane zvavakaita. Iye aitsvaga umambo hwaMwari.
Iye akati kwavari, “Zvinhuiko izvozvo.” Ivo vakati kwaari, “ZvaJesu weNazareti, aiva muporofita, ane simba guru muzviito nomushoko pamberi paMwari napamberi pavanhu vose
vairamba vari muTemberi vachirumbidza Mwari.
Kubvira pakutanga, iye akanga ari pamwechete naMwari.
Kwakazova nomunhu akatumwa naMwari, zita rake ainzi Johani.
Asi vose vakamugamuchira vakatenda muzita rake akavapa simba rokuva vana vaMwari
vasina kuberekwa nokuda kwoukama hweropa kana kuti nezvinodiwa nenyama. Kana nechido chomurume asi nokuda kwaMwari.
Hakuna akamboona Mwari asi Mwanakomana mumwechete waMwari iye wapamwoyo paBaba ndiye akaita kuti vazivikanwe kuvanhu.
Ramangwana acho, Johani akaona Jesu achiuya kwaari akati, “Tarisai muone hwayana yaMwari inobvisa chitadzo chapasi.
Ini ndakazviona uye ndinopupura kuti uyu Mwanakomana waMwari.”
akatarisa Jesu achifamba akati, “Tarisai muone Hwayana yaMwari.”
Natanieri akamupindura achiti, “Rabhi imi ndimi Mwanakomana waMwari, ndimi mambo weIsiraeri.”
Akati kwaari, “Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri muchaona denga rakazaruka vatumwa vaMwari vachikwira nokuburuka nechapamusoro pomwanakomana womunhu.”
Murume uyu akauya kuna Jesu nousiku akati kwaari, “Rabhi tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari nokuti hakuna anogona kuita zviratidzo zvamunoita kunze kwokuti Mwari ainaye.”
Jesu akamuti, “Zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwauri, ‘Kana munhu asina kuzvarwa patsva haangaoni umambo hwaMwari.’ ”
Jesu akapindura achiti, “Zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwauri, ‘Kana munhu akasazvarwa nemvura naMweya haangapindi muumambo hwaMwari.
Anotenda maari haapihwi mhosva asi asingatendi maari atova nemhosva nokuti haana kutenda muzita roMwanakomana mumwechete oga waMwari.
Asi anoita zvechokwadi anouya kuchiedza kuti zvionekwe pachena kuti mabasa ake akaitwa muna Mwari.
“Mwenga achichata ndewemuwani. Shamwari yomuwani inomira ichiteerera achitaura; inofara zvikuru kunzwa izwi romuwani. Saizvozvo rufaro rwanguwo rwazara kuti tuba.
Munhu anogamuchira uchapupu hwake ihwohwo anotsinhira kuti, Mwari ari pachokwadi.
Nokuti akatumwa naMwari anotaura mazwi aMwari nokuti Mwari haana kumupa Mweya achiita zvokuera.
Anotenda muna Mwanakomana anoupenyu husingaperi uyo asingateereri Mwanakomana haamboona upenyu asi hasha dzaMwari dzichanangana naye.”
Jesu akamupindura achiti: “Dai wanga uchiziva kuti Mwari ari kuda kukupei uye kuti ndiani ari kukuti ndipewo mvura yokunwa, ungatodai uriwe wamukumbira iye achikupa mvura mhenyu.”
Mwari mweya; saizvozvo, vanomunamata vanofanira kumunamata muMweya nomuchokwadi.”
Ndokusaka vaJudha vakatonyanya kuda kumuuraya nokuti haana kungotyora chete mutemo weSabata, asi kuti akatiwo Mwari ndiBaba vake pachake achizvienzanisa naMwari.
Zvechokwadi chaizvo ndinoti kwamuri nguva iri kuuya uye yatosvika yokuti vakafa vanzwe izwi roMwanakomana waMwari. Avo vacharinzwa vachava vapenyu.
Asi sokukuzivai kwandinoita, rudo rwaMwari mamuri hamuna.
Mungatenda sei imi munofarira kurumbidzana, musingatsvaki mbiri inobva kuna Mwari mumwechete.
Jesu ndokutora zvingwa zviya otenda Mwari ndokuzvigovera kuvanhu vakanga vakagara pasi. Akaita zvimwechetezvo nehove dziya. Akavapa pamadiro avo.
Musashandire chokudya chinopera asi chokudya chinogara kusvikira kuupenyu husingaperi chamunopiwa noMwanakomana womunhu, nokuti Mwari Baba vakaisa rupawo rwavo paari.”
Ivo ndokuti kwaari, “Chii chatingaite kuti tishande mabasa aMwari?”
Jesu akavapindura achiti, “Basa raMwari nderiri rokuti: Imi munofanira kutenda muna iye waakatuma.”
Nokuti chingwa chaMwari ndechiya chinobva kudenga uye chinopa upenyu kunyika.”
Zvakanyorwa muvaporofita kuti, ‘Vose vachadzidziswa naMwari. Munhu wose anoteerera Baba nokudzidza kwavari anouya kwandiri.’
Hazvirevi kuti pana akamboona Baba kusiya iye akabva kuna Mwari ndiye akaona Baba.
Takadavira uye tinoziva kuti imi ndimi Mutsvene waMwari.”
Kana munhu ane chido chokuita zvinoda Mwari anobva aziva kuti rudzidziso urwu runobva kuna Mwari here, kana kuti ndiri kutaura zvomusoro wangu.
Asi zvino munoda kundiuraya; ini ndiri munhu akakutaurirai chokwadi chandakanzwa kuna Mwari. Izvi hazvisirizvo zvaiitwa naAbhurahamu.
Imi munoita zvinoitwa nababa venyu.” Ivo vakati kwaari, “Isu hatisi vana vomusango. Tina Baba mumwechete, iye Mwari pachake.”
Jesu wakavati, “Dai Mwari ari Baba venyu mungadai muchindida nokuti Mwari ndiye dzinde rokwandinobva. Handina kungouyawo zvomusoro wangu asi iye ndiye akandituma.
Munhu waMwari anonzwa zvinotaurwa naMwari nezvo imi hamuzvinzwi nokuti hamusi vanhu vaMwari.”
Jesu akati, “Ini ndikazvirumbidza mbiri yangu haina maturo, Baba vangu ndivo vanondirumbidza, ivo vamunoti ndivo Mwari wenyu.
Jesu akapindura achiti, “Haasi munhu uyu akatadza kana kuti vabereki vake, asi zvakaitirwa kuti mabasa aMwari aoneswe maari.
Vamwe vaFarisei vakati, “Munhu uyu haabvi kuna Mwari nokuti haachengeti Sabata.” Vamwewo vakati, “Zvingaitike sei kuti munhu mutadzi aite zviratidzo zvakadai?” Pakabva pamuka nharo pakati pavo.
Naizvozvo vakadaidzazve kechipiri munhu uya akaberekwa ari bofu vakamuti, “Iwe remekedza Mwari, isu tinoziva kuti munhu uyu mutadzi.”
Isu tinoziva kuti Mwari akataura kuna Mosesi. Asi zvomunhu uyu, hatizivi kwaanobva.”
Tinoziva kuti Mwari haateeri vatadzi, asi kana munhu ari munamati waMwari, uye achiita kuda kwake, Mwari anomunzwa.
Dai munhu uyu anga asingabvi kuna Mwari hapana chaaikwanisa kuita.”
VaJudha vakamupindura vachiti, “Hatisi kukutakira basa rakanaka asi kushonha Mwari nokuti iwe uri munhu kudai asi uri kuzviita Mwari.”
Jesu akavapindura achiti, “Hazvina kunyorwa here mumutemo wenyu zvichinzi, ‘Ndakati muri vanamwari.’
Kana akavati ndavanamwari vaya vakavingwa nezwi raMwari. Saka Magwaro Matsvene haapikiswi.
Zvino munoti uyo akaitwa mutsvene naBaba, akatumwa pasi pano, uri kushonha Mwari nokuti ndati ndiri Mwanakomana waMwari.
Jesu paakazvinzwa akati, “Kurwara uku hakupereri murufu, ndekwekuratidza mbiri yaMwari, kuti Mwanakomana waMwari arumbidzwe nako.”
Akataura izvi ndokubva ati, “Shamwari yedu Razaro yakotsira asi ndinoenda kundomumutsa muhope.”
Nyange iye zvino ndinoziva kuti chose chamunokumbira kuna Mwari, Mwari anokupai.”
Akati kwaari, “Hongu, Tenzi chokwadi ndinotenda kuti ndimi Mesia. Mwanakomana waMwari anonzi achauya pasi pano.”
Jesu akati kwaari, “Handina here kumbokutaurira kuti ukatenda uchaona mbiri yaMwari.”
Uye kwete kufira rudzi chete asi kukokorodza pamwechete vana vaMwari vakapararira kwose kwose.
Chikwata chavanhu chakanga chiripo chakazvinzwa. Vakati, “Kwatinhira,” vamwewo vakati, “Mutumwa waMwari ataura kwaari.”
Zvakaitika kuti zvakataurwa nomuporofita Isaya zvizadziswe zvokuti, “Tenzi ndiani akatenda zvatakataura simba raMwari rakaratidzwa kunaani?”
Chikonzero chacho chaiva chokuti vaida kurumbidzwa navanhu kupinda kurumbidzwa naMwari.
Jesu aizviziva kuti Baba vakanga vaisa zvinhu zvose mumaoko ake, uye kuti akabva kuna Mwari uyezve kuti akanga avakudzokera kuna Mwari.
Pakabuda Judhasi, Jesu akati, “Zvino Mwanakomana womunhu awaniswa mbiri uye maari Mwari anowaniswa mbiri.
Kana Mwari awaniswa mbiri maari Mwariwo achamuwanisa mbiri maari iye pachake achibva amuwanisa mbiri iyoyo pakarepo.
“Mwoyo yenyu ngairenge kutambudzika tendai muna Mwari mutendewo mandiri.
Hakuna rudo runopfuura urwu rwokuti munhu anofira shamwari dzake.
Muri shamwari dzangu kana muchiita zvandinokuudzai.
Handicharamba ndichikutii varanda nokuti muranda haazivi zvinoitwa natenzi wake asi ndava kukutii shamwari nokuti ndakakuzivisai zvose zvandakanzwa kuna Baba vangu.
Vachakudzingai mumaSinagogu. Chokwadi, chokwadi nguva iri kuuya yokuti anokuurayai achafunga kuti ari kutoitira Mwari.
Aiwa! Ivo Baba pachavo vanokudai nokuti imi makandida uye makatenda kuti ndakabva kuna Mwari.
Zvino tava kuziva kuti munoziva zvose uye kuti hamumiriri kuti munhu atange akubvunzai; nezvo tava kutenda kuti makabva kuna Mwari.”
Uhu ndihwo upenyu husingaperi: kuziva imi Mwari mumwechete wechokwadi naJesu Kristu wamakatuma.
VaJudha vakamupindura kuti, “Isu tine mutemo, maererano nomutemo iwoyo anofanira kuti afe nokuti akazviita Mwanakomana waMwari.”
Nezvizvi Pirato akatsvaka nzira yokumusunungura nayo. Asi vaJudha vakadaidzira vachiti, “Kana mukasunungura munhu uyu, hamusi shamwari yaSiza, nokuti munhu wose anozviita mambo ari kupandukira Siza.”
Jesu akati kwaari, “Usandibate nokuti handisati ndakwira kuna Baba. Asi enda kuhama dzangu undoti kwavari ndiri kuenda kuna Baba vangu naBaba venyu, kuna Mwari wangu naMwari wenyu.”
Tomasi akamupindura achiti, “Ndimi Tenzi wangu naMwari wangu.”
Izvi zvakanyorwa kuti mudavire kuti Jesu ndiye Mesia Mwanakomana waMwari uyewo kuti nokutenda ikoko muve noupenyu muzita rake.
(Izvi akazvitaura kuratidza rufu rwaaizorumbidza narwo Mwari). Mushure mezvo akati kwaari, “Nditevere.”
Mushure mokutambudzika kwake akazviratidza kwavari kuti mupenyu nezvinhu zvakawanda zvinoita kuti munhu abvume kuti ichokwadi sezvizvi zvinoti: kuzviratidza kwavari kwamazuva makumi mana uye kutaura nezvoumambo hwaMwari.
Kune vokuKiriti nevokuArabhia. Tiri kuvanzwa vachitaura mundimi dzedu mabasa makuru aMwari.”
“ ‘Mumazuva okupedzisira, ndizvo zviri kutaura Mwari, ndichadururira Mweya wangu pamusoro pavanhu vose. Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaporofita. Vechidiki venyu vachaona zviratidzo, vakwegura venyu vacharotswa hope.
“Varume, vaIsiraeri teererai mazwi aya anoti Jesu wokuNazareti, munhu akapupurirwa kwamuri naMwari namabasa makuru nezvishamiso nezviratidzo zvakaitwa pakati penyu naMwari nemaari sokuziva kwenyu,
Jesu iyeyo, wamakaturirwa maererano nourongwa hwakanyatsoti tsvikiti uye nokufanoziva kwaMwari, imi makamuroverera pamuchinjikwa mukamuuraya muchishandisa vanhu vasina mutemo.
Asi Mwari akamumutsa amusunungura marwadzo orufu nokuti zvakanga zvisingagoneki kuti arambe akasungwa narwo.
Chikonzero ndechokuti Dhavhidhi achitaura nezvake anoti: “Ndaiona Mwari ari pamberi pangu nguva dzose nokuti ari kurudyi kwangu kuti ndirege kuzunguzwa.
Nezvo somuporofita, uye zvaaiziva kuti Mwari akapika nechitsidzo kwaari kuti achaisa mumwe wechizvarwa chake pachigaro chake choumambo,
“Mwari akamutsa iye Jesu iyeyo, isu tose tiri zvapupu zvaizvozvo.
Asumudzirwa kurudyi rwaMwari uye agamuchira kubva kuna Baba chitsidzo chaMweya Mutsvene, adururira zvamurikuona nokunzwa izvi.
“Naizvozvo imba yose yaIsiraeri ngainyotsoziva kuti Mwari akamuita kuti ave Tenzi naMesia, iye Jesu uyu wamakaroverera pamuchinjikwa.”
Nokuti chitsidzo ichocho ndechenyu navana venyu navose vari kure, vose vanodaidzwa naTenzi Mwari wedu kwaari.”
vachirumbidza Mwari vachidiwa navanhu vose. Tenzi vaiwanziridza uwandu hwavo zuva nezuva hwaavo vainge vachiponeswa.
Akakwakuka akamira akafamba akapinda muTemberi pamwechete navo achiti pamwe fambei pamwe osvetuka svetuka achirumbidza Mwari.
Vanhu vose vakamuona achifamba achirumbidza Mwari
Mwari waAbhurahamu naIsaki naJakobho Mwari wamadzitateguru edu akarumbidza muranda wake Jesu wamakaturira mukamuramba panaPirato paakafunga zvokumusungunura.
mukauraya muridzi weupenyu, iye akamutswa naMwari kuvafi. Isu tiri zvapupu zvaizvozvo.
Asi Mwari zvaakafanotaura nemiromo yavaporofita vose kuti Mesia wake anofanira kutambudzika. Izvi akazvizadzisa nenzira iyoyi.
anofanira kumbochengetedzwa kudenga kusvikira zvinhu zvose zvaitika zvakataurwa naMwari nomuromo wavaporofita vake vatsvene vakare.
Mosesi akanyatsotaurawo achiti, ‘Tenzi Mwari achakumutsirai muporofita mukati mehama dzenyu sokumutsa kwaakandiita. Munofanira kumuteerera muna zvose zvaanokutaurirai.
Ndimi vana vavaporofita vacho vanorehwa uye vechitenderano chaakaitwa naMwari namadzibaba enyu achiti kuna Abhurahamu, nokumwana wako mhuri dzose dzapasi pose dzichakomborerwa.’
Mwari paakamutsa muranda wake akamutumira pokutanga kwamuri kuti akukomborerei nokukutendeutsai mose kubva kuuipi hwenyu.”
ngazvizivikanwe kwamuri mose uye kuvanhu vose veIsiraeri kuti nezita raJesu Kristu weNazareti wamakarovera pamuchinjikwa akamutswa naMwari kuvakafa pamusana pake munhu uyu amire pamberi penyu akasimba.
Asi Pita naJohani vakavapindura vachiti, “Chimbopafungaiwo zvenyu kuti zvingaite here, pamberi paMwari, kuteerera imi panokuteerera Mwari.
Pavakawedzera kuvayambira vakavarega vachienda vashaya pokuvaranga napo pamusana pavanhu nokuti vanhu vose vairumbidza Mwari nezvakanga zvaitika.
Pavakaregedzwa vakaenda kushamwari dzavo vakavarondedzera zvavakanga vataurirwa navapristi navakuru vakuru.
Pavakazvinzwa vakadaidzira pamwechete kuna Mwari vachiti, “Tenzi imi makasika denga napasi negungwa nazvose zvirimo imi naMweya Mutsvene mukati
Pavakapedza kunamata nzvimbo yavakanga vakaungana yakandengendeka vakabva vazadzwa vose naMweya Mutsvene vakataura izwi raMwari nechivindi.
Pawakanga usati watengeswa wakanga usiri wako here uye pawakanga watengeswa mari yacho yakanga isiri mumaoko ako here? Ko zvaita seiko kuti ufunge kuita izvi mumwoyo mako? Hauna kurevera munhu nhema asi Mwari.”
Pita ndokuti kwaari, “Ko matenderana sei kuedza Mweya waMwari? Teerera unzwe tsoka dzavanhu vaviga murume wako dzava pamusuo. Vachakutakura vachikuburitsa kunze.”
Asi usiku mutumwa waMwari akazarura makonhi ejeri akavaburitsa ndokuvati,
Mwari wamadzibaba edu akamutsa Jesu wamakauraya nokumurembedza pamuti.
Mwari akamusimudzira kurudyi rwake somutungamiri nomununuri kuti Isiraeri ipinduke iregererwe zvitadzo.
Isu tiri zvapupu zvezvinhu izvi uyewo Mweya Mutsvene akapiwa naMwari kuna vanomuteerera.”
asi kana zviri zvaMwari hamumbokwanisa kuvaparadza. Pamwe mungatowanikwa mavakurwisana naMwari.”
Vane gumi navaviri vakaunganidza gungano ravadzidzi vakati, “Hazvina kunaka kuti tirege kuparidza shoko raMwari tichipa zvokudya.
Shoko raMwari rakaenderera mberi uye uwandi hwavadzidzi hwakakura zvikuru kwazvo muJerusaremu. Vapristi vazhinji vakagamuchirawo chitendero.
Vakasoka vamwe varume kuti vati, “Takamunzwa achitaura manzwi okushonha Mosesi naMwari.”
Sitefani akati, “Hama nemi madzibaba ndinzwei. Mwari wembiri akazviratidza kuna tateguru wedu Abhurahamu paakanga ari kuMesopotamia asati andogara kuHarani akati kwaari,
Akabva kunyika yavaKaradhia akandogara kuHarani. Pakafa baba vake, Mwari akamubvisa ikoko akamuunza munyika ino yamugere iye zvino.
Mwari akati zvizvarwa zvake zvichava vatorwa munyika yavamwe vachavaita varanda nokuvabata zvakaipa kwamakore mazana mana.
Asi Mwari akati, ‘Ndicharanga rudzi irworwo rwavachashandira. Mushure maizvozvo vachabuda vozondinamata munzvimbo ino.’
“Pamusana pokuti mamwe madzitateguru aya akaita shanje naJosefi, akamutengesa kuIjipiti asi Mwari aiva naye.
“Nguva yezvakanga zvatsidzirwa Abhurahamu naMwari payakanga yava kusvika, vanhu vakawanda, vakava vazhinji
Panguva iyoyo ndipowo pakaberekwa Mosesi uye akanga akanaka zvikuru kwazvo pana Mwari. Akarerwa kwemwedzi mitatu mumba mababa vake.
Mosesi aifunga kuti hama dzake dzainzwisisa kuti Mwari aida kuvanunura nomumaoko ake asi havana kunzwisisa.
‘Ndini Mwari wamadzibaba ako, Mwari waAbhurahamu naIsaki naJakobho.’ Mosesi akadedera akatya kutarisa.
Mosesi uya wavakaramba vachiti, ‘Ndiani akakuita mambo nomutongi?’ Murume iyeyo ndiye akatumwa naMwari samambo somununuri nesimba romutumwa akazviratidza mugwenzi.
Ndiyeyu Mosesi wacho akati kuvaIsiraeri, ‘Mwari vachakumutsirai muporofita muhama dzenyu sokundimutsa kwaakaita.
vachiti kuna Aroni tigadzirire vamwari vokutitungamirira. ZvaMosesiwo uyu akatiburitsa munyika yeIjipiti hatizivi zvakaitika kwaari.
Mwari akavafuratirawo ndokuvati chi mukunamata gurusvusvu romudenga sokunyorwa kwazvakaitwa mubhuku ravaporofita zvichinzi: “ ‘Makambopira kwandiri here mhuka dzakauraiwa kana zvibayiro kwamakore makumi mana amaiva murenje nhaimi vaIsiraeri?
Handiti makatakura tendhe raMoreki nenyenyedzi yamwari Refani, zvifananidzo zvamakaumba kuti munamate? Ndichakudzingirai kunyika iri mberi kweBhabhironi.’
“Madzibaba edu akanga ane tendhe rechipupuriro murenje raiva rakaita sezvakanga zvataurwa naMwari akataura kuna Mosesi kuti ariite maererano namamiriro aro aakanga amboona.
Madzibaba eduwo akarigamuchira akauya naro pamwechete naJoshuwa pavakatorera nyika vechirudzi vaifanodzingirwa madzibaba edu naMwari. Vaiva naro kusvikira pamazuva aDhavhidhi
akafadza Mwari. Dhavhidhi akazokumbira kuti atsvakire Mwari waJakobho pokugara.
Imi vanhu vomusoro wakaoma, vanhu vomwoyo isinei naMwari, venzeve dzisingadi kunzwa zvaMwari, vanhu vokurwisana naMweya. Zvaiita madzibaba enyu ndizvowo zvamunongoita.’
Asi iye azere naMweya Mutsvene, akatarisisa mudenga akaona mbiri yaMwari, Jesu amire kurudyi rwaMwari
akati, “Tarirai muone, ndiri kuona denga rakazaruka Mwanakomana womunhu akamira kurudyi rwaMwari.”
Vose vakamuteerera kubvira kuvaduku kusvika kuvakuru vachiti, “Murume uyu ndiye mumwe mwari uya anonzi Samukurumukuru.”
Asi pavakatenda Firipi paaiparidza Shoko Rakanaka nezvoumambo hwaMwari uye zita raJesu Kristu vakaombekwa, varume navakadzi.
Vapositori vaiva kuJerusaremu pavakanzwa kuti Samaria yakanga yagamuchira Shoko raMwari vakavatumira Pita naJohani.
Asi Pita akati kwaari, “Parara nemari yako iyoyo nokuti wafunga kuti unogona kuwana chipo chaMwari nemari.
Hauna nzvimbo kana mugove mune zvinhu izvi nokuti mwoyo wako hauna kururama pamberi paMwari.
Mutumwa waMwari akati kuna Firipi, “Simuka uende kumaodzanyemba kunzira inodzika kuGaza ichibva kuJerusaremu.” Nzira iyi inzira yomurenje.
Firipi akati, “Kana uchitenda nemwoyo wose unogona kuombekwa.” Iye akapindura achiti, “Ndinotenda kuti Jesu Kristu Mwanakomana waMwari.”
Pakarepo aiparidza mumasinagogu achiti Jesu Mwanakomana waMwari.
munhu aitya Mwari pamwechete nemhuri yake yose aiva noruoko rwokupa kwazvo kuvanhu uye aigara achinamata kuna Mwari.
Paawa yechitatu yamasikati akanyatsoona muchiratidzo mutumwa waMwari achipinda maaiva achiti, “Koneriasi.”
Akamutarisisa achitya akati, “Chiiko nhai Tenzi?” Mutumwa ndokuti, “Minamato yako nezvipo zvako kuvanhu zvakwira kudenga sechinhu chinoyeukwa pamberi paMwari.
Izwi rakauyazve kechipiri kwaari richiti, “Zvinenge zvachenurwa naMwari usazviti zvakan'ora.”
Ivo vakati, “Koneriasi, mutariri wezana ramasoja munhu ari pachokwadi, munhu anotya Mwari uye anorumbidzwa norudzi rwose rwechiJudha akatungamirirwa nomutumwa anoera kuzokudaidzai kuti muuye kumba kwake kuti anzwe zvamungataure.”
Pazuva rinotevera racho vakapinda muSezaria. Koneriasi anga achivatarisira uye, akanga atodaidza hama neshamwari dzake dzapamwoyo.
akati kwavari, “Imi munozviziva pachenyu kuti zvinorambidzwa nomutemo zvakadii kuti muJudha afambidzane kana kushanyira ani zvake worumwe rudzi asi Mwari wandiratidza kuti handifaniri kuti ani zvake haakodzeri kana kuti akan'ora.
Akati, ‘Koneriasi munamato wako wanzwika uye zvipo zvako kuvarombo zvakayeukwa pamberi paMwari.
Saizvozvo ndakabva ndatumira nhume kwamuri pakarepo. Imiwo maita zvakanaka kuti mauya. Naizvozvo tiri pano tose pamberi paMwari kuti tinzwe zvamaudzwa naMwari.”
Pita akatanga kutaura achiti, “Chokwadi ndiri kuona kuti Mwari haana rusaruro.
Mwari akazodza Jesu weNazareti naMweya Mutsvene uye akamupa simba. Munozivawo kuti akafamba achiita zvakanaka achiporesa vose vainge vari pasi pesimba raDhiyabhori nokuti Mwari aiva naye.
Mwari akamumutsa pazuva retatu akamuratidza
kwete kuvanhu vose asi kunesu vakasarudzwa naMwari kuva zvapupu isu takadya nokunwa naye mushure mokumuka kwake muvafi;
uye akatiti tinofanira kundoparidza vanhu nokupupura kuti ndiye akagadzwa naMwari kuva mutongi wavapenyu navakafa.
nokuti vakanzwa vachitaura nendimi uye vachirumbidza Mwari.
Vapositori navehama vaiva kuJudhea vakanzwa kuti vechirudzi vakanga vagamuchirawo Shoko raMwari.
Asi izwi rakapindura kechipiri richibva kudenga richiti, ‘Zvinenge zvachenurwa naMwari usazviti zvakan'ora.’
Zvino kana Mwari akapa chipo chimwechetecho chaakapa kwatiri patakatenda muzita raTenzi Jesu Kristu. Ko ndiri aniwo zvangu ndaigona kumirisana naMwari.”
Pavakanzwa izvi vakapwiswa vakarumbidza Mwari vachiti, “Saka Mwari anoitawo kuti vechirudzi vatendeuke vawane upenyu.”
Ipapo Pita akachengetedzwa ari mujeri. Asi sangano rakamunamatira zvikuru kuna Mwari.
“Inga izwi romumwe mwari chaiye kwete romunhu.”
Pakarepo mutumwa waTenzi akamurova nokuti haana kupa mbiri yacho kuna Mwari. Akadyiwa nehonye akafa.
Asi Shoko raMwari rakaramba richikura richiwanda.
Pavakasvika Jerusaremu vakagamuchirwa nesangano navapositori navakuru vakuru vakarondedzera zvose zvavakaitiswa naMwari.
Pashure pokunge patauriranwa zvikuru, Pita akasimuka akati kwavari, “Hama, imi munoziva kuti pamazuva okutanga, Mwari akandisarudza pakati penyu kuti vechirudzi vanzwe kubva pamuromo pangu dama reShoko Rakanaka kuti vadavire.
Mwari anoziva mwoyo womunhu akazvitsigira nokuvapa Mweya Mutsvene sezvaakangoitawo kwatiri.
Zvino munoedzerei Mwari nokuisa joko pamutsipa yavadzidzi risina kukwanisa kutakurwa namadzibaba edu kana nesu?
Gungano rakati zii kunyarara. Vakateerera Bhanabhasi naPauro vachirondedzera zviratidzo nezvishamiso zvakaitwa naMwari nemavari pakati pevechirudzi.
Simoni atitaurira kuti Mwari akashanyira sei vechirudzi, nokutora vanhu mukati mavo vanodaidzwa nezita rake.
“Naizvozvo ini ndinofunga kuti hatifaniri kunetsa vechirudzi vanotendeukira kuna Mwari.
Paakaona chiratidzo ichocho, takabva tarongedzera kuenda kuMasedhonia. Takanga taziva kuti Mwari akanga atidaidza kundoparidza Shoko Rakanaka kwavari.
Mumwe waavo vakatinzwa aiva mudzimai ainzi Ridhia weguta reTiatira aitengesa machira oruvara rwehute ainge ari munamati waMwari. Tenzi akazarura mwoyo wake kuti atirimuke mwoyo kune zvaitaurwa naPauro.
Musikana uyu aitevera Pauro nesu achidaidzira achiti, “Varume ava varanda vaMwari Wokumusorosoro vari kukuparidzai nzira yoruponeso.”
Pokunge pava pakati pousiku Pauro naSirasi vainge vachinamata vachikumbira vachiimbira Mwari dzimbo, vasungwa vachivateerera.
Akakwira navo kumba kwake akavapa chokudya akafara kwazvo nemba yake yose kuti akanga atenda kuna Mwari.
Vamwe vavo vakazvibvuma vakabatana naPauro naSirasi sezvakangoitawo vazhinji vechiGiriki vaitya Mwari navadzimai vapamusoro vakawanda.
VaJudha vokuTesaronika pavakanzwa kuti Shoko raMwari riri kuparidzwa kuBherea naPauro, vakaendawo ikoko kundomutsa manyongori nokunyandutsa vanhu.
Naizvozvo aikurukurirana musinagogu navaJudha navaitya Mwari. Mazuva ose, panzvimbo inoungana vanhu veguta iroro, aikurukura navainge vangouyawo ipapo.
Vamwe vebato renyanzvi dzokufunga vechiEpikurieni nevechiSitoiki vakasangana naye. Vamwe vakati, “Ko iye mubvotomoki uyu arikuda kuti kudiiko?” Vamwewo vakati, “Anenge muparidzi wezvavamwari vasingaziikanwi,” nokuti aiparidza Jesu nokumuka muvakafa.
nokuti zvandafamba neguta ndikaona zvinhu zvamunonamata ndawana imwe atari yakanyorwa kunzi, ‘KUNA MWARI ASINGAZIIKANWI.’ Chamuri kunamata musingazivi ichocho ndicho chandiri kukuparidzai chokuti,
‘Mwari iyeyo ndiye akasika nyika nezvose zvirimo. Ndiye Tenzi wedenga napasi. Haagari muTemberi dzakavakwa navanhu.
uye kuti vatsvage Mwari nechitarisiro chokuti vangangomutsvanzvadzira vagomuwana asi iye haasiri kure kwomumwe nomumwe wedu.’
Zvatiri vana vake hatifaniri kufunga kuti Mwari akafanana nendarama kana sirivha kana ibwe zvinongova chifananidzo chakaitwa noumhizha kana zvinongofungwawo navanhu.
Nguva dzokusaziva dziya, Mwari haana hanya nadzo. Asi iye zvino anoti munhu wose, kose kose zvako, anofanira kupinduka,
Akabvapo akaenda kumba komumwe ainzi Titosi Jusitusi munhu aitya Mwari. Imba yake yaiva pedyo nesinagogu.
Nezvo akagaramo kwegore nemwedzi mitanhatu achidzidzisa Shoko raMwari pakati pavo.
vachiti murume uyu anokurudzira vanhu kunamata Mwari zvisiri pamurao.
Paakanga ava kuenda akati, “Ndichadzoka kwamuri kana Mwari achida. Akaenda nechikepe achibva kuEfesusi.”
Mwari akaita minana inoshamisa kwazvo namaoko aPauro
Mumwe murume ainzi Dhemetiriusi, mhizha yezvesirivha aiumba tuTemberi twesirivha tudikidiki twamwari Atemisi twaiwanisa mari yakawanda kune vaitwugadzira.
Munozviona uye muri kuzvinzwa kuti kwete muEfesusi chete asi kutenge Asia yose, Pauro uyu ari kukurudzira nokutsautsa vanhu vane chitsama chakati kuti, achiti, ‘Vamwari vakaitwa namaoko havasi vamwari.’
Pane njodzi, kwete chete, yokuti shawo yedu iyi ichatorwa sechinhu pasina asi kutiwo Temberi yamwarikadzi mukuru Atemisi, ichava chinhu pasina uyewo achakoromorwa paukuru hwake, iye anonamatwa neAsia yose uye napasi pose.”
Uyewo vamwe vakuru vakuru vomuAsia vaiva shamwari dzake vakatuma shoko rokuti ngaarege kana kumboedza zvake kupinda munhandare yemitambo.
Mauya navanhu ava asi havasi vapambi veTemberi kana vanhu vanoshonha mwarikadzi wedu.
ndichipa uchapupu kuna vaJudha nokuna vaGiriki nezvokutendeukira kuna Mwari uye nezvechitendero muna Tenzi wedu Jesu Kristu.
nokuti handina kuteta kukutaurirai pachena zvirongwa zvose zvaMwari.
Zvingwarirei imi pachenyu nedanga rose ramakaitwa vatariri varo naMweya Mutsvene kuti muchengete sangano raMwari raakawana neropa roMwanakomana wake pachake.
Pashure pokuvakwazisa akavarondedzera chimwe nechimwe chezvinhu zvakaitwa naMwari pakati pevechirudzi nomubasa rake iye Pauro.
Pavakazvinzwa vakarumbidza Mwari. Vakamuti, “Unoona here nhai hama, kuti zviuru zvingani pakati pavaJudha vakatenda, vane shungu noMutemo.
“Ini ndiri muJudha ndakaberekerwa kuTasusi kuSirisia. Asi ndakarerwa muguta rino ndiri mumaoko aGamarieri ndikanyatsodzidziswa kuchengeta nemazvo chaimo mutemo wamadzibaba edu ndiine shungu naMwari sezvamakangoitawo imi nhasi uno.
“Mumwe munhu anonzi Ananiya, munamati chaiye waMwari maererano nomutemo, aitaurwa zvakanaka nezvake navaJudha vose vaigara ikoko.
Iye akati, “Mwari wamadzibaba edu akakusarudza kuti uzive zvaanoda, uye kuti uone Mururami uyewo kuti unzwe izwi rinobva mumuromo make
Pauro akanyatsotarisana nedare akati, “Hama ndakagara nehana yakachena pamberi paMwari kusvikira pari nhasi.”
Pauro akati kwaari, “Mwari achakurova, iwe chidziro zvacho chadzururwa kuchena nesuko. Ndozvawakagarira ipapo kuti unditonge zviri pamutemo asi uchityora mutemo nhai? Uri kuti ndinofanira kurohwa.”
Vakanga vamire padyo naye vakati, “Unoda kushora mupristi mukuru waMwari here?”
Asi izvi ndinobvuma pamuri, kuti ndinonamata Mwari wamadzibaba edu ndichitevera nzira yekavari kuti kaboka. Ndinotenda zvose zvakatemwa nomutemo kana zvakanyorwa navaporofita.
Ndine chitarisiro muna Mwari zvinobvumwa naivava kuti kuchava nokumuka kwavafi, vakarurama navakaipa.
Saizvozvo ndinoedza kwazvo kuchengetedza hana yangu yakachena kuna Mwari nokuna vanhu.
Ipapo akaudza mutungamiri wezana kuti Pauro anofanira kuchengetedzwa ari muusungwa asi aine rusununguko rwakati kuti uye kuti hapana shamwari dzake dzinorambidzwa kumuwanisa zvinomubatsira kurarama.
Zvino ndiri pano ndichitongerwa chitarisiro munezvakatsidzirwa madzitateguru edu naMwari
Sei muchizviona sechinhu chisingagoneki kuti Mwari anomutsa vakafa.
Izvi ndakazviita muJerusaremu. Handina kungozaririra vazhinji vavasarudzwi vaMwari mumajeri ndichishandisa simba randakapiwa navapristi vakuru asi kuti pavaiuraiwa ndairatidza kuwirirana navo.
Ndakavaranga kakawanda mumasinagogu ose uye ndakaedza kuti vashonhe Mwari. Ndaivatambudza ndiine hasha dzisingatauriki kusvika kumaguta okunze kwenyika.
kuti uzarure maziso avo vatendeuke kubva murima vachienda muchiedza uye kubva mumaoko aSatani vachienda mumaoko aMwari kuti vawane kuregererwa kwezvitadzo zvavo uye vawane nzvimbo mukati mevavo vakasarudzwa pamusana pechitendero chavo mandiri.’
kuDhamasikusi tevere vokuJerusaremu ndokuzouyawo nyika yose yeJudhea nokune vechirudzi kuti vanofanira kupinduka vadzokere kuna Mwari vaite zvinowirirana nokutendeuka kwavo.
Kusvikira pari nhasi ndakabatsirwa naMwari. Saizvozvo ndimire pano ndichipupura kuvaduku nokuvakuru pasina chimwe chandinotaura kunze kwezvakataurwa navaporofita naMosesi kuti zvichaitika
Pauro akati, “Ingave nguva pfupi kana refu zvayo, ndinotokumbira kuna Mwari, kuti kwete imi moga asi kuti vose vari kundinzwa nhasi uno vave sezvandiri, kunze kwecheni idzi chete.”
Vakamirira vachifunga kuti zvimwe achazvimba kana kungowira pasi achibva afa. Asi pavakamirira kwenguva yakareba pasina chakaipa chakaitika kwaari, vakasanduka vavakuti, “Ndimwari.”
Mushure memwedzi mitatu takatangisa kuenda nechikepe chakanga chapedzera nguva yechando chiri pachitsuwa ichocho. Chikepe ichocho chaiva chokuArekizandiria chaiva nechiga chinonzi Vamwarimapatya.
Ikoko, vehama pavakanzwa nezvedu vakauya zvokutosvika kumusika weApia nokunzvimbo yainzi Hoteranhatu kuzotichingura. Pauro paakavaona akatenda Mwari akabva atsunga mwoyo.
Vakaronga zuva rokusangana naye, vakazouya paaigara vakawanda kwazvo iye akavarondedzera nyaya iyoyi kubva mangwanani kusvikira mauro achipa uchapupu kuhumambo hwaMwari achiedza kuti vabvume nezvaJesu sokunyorwa kwazvakaitwa mumutemo waMosesi navaporofita.
“Naizvozvo chizvizivai kuti ruponeso urwu rwaMwari rwakatotumirwa kune vechirudzi. Vachateerera.”
Ndinodaro nokuti Mwari iye wandinoshandira nomwoyo wangu wose nokuparidza kwandinoita Shoko Rakanaka roMwanakomana wake, ndiye chapupu changu kuti ini ndinoramba ndichingokudomai muminamato yangu
ndichikumbira kuti, zvimwe nokuda kwaMwari, pamwe iye zvino ndipo pandingakwanise kuuya kwamuri.
nokuti mariri, kururama kwaMwari kunoratidzwa pachena nechitendero chinobvira pokutanga kusvikira pokupedzisira sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, “Munhu anoruramiswa nechitendero achararama.”
Hasha dzaMwari dzinoratidzwa pachena dzichibva kudenga dzakanangana nokusanamata Mwari kose nouipi hwavanhu vanombunyikidza chokwadi vachishandisa zvakaipa zvavo,
nokuti zvinogona kuzivikanwa nezvaMwari zviri pachena kwavari nokuti Mwari, akaratidza zvinhu izvozvo kwavari.
Chiripo ndechokuti kunyange vaiziva zvavo Mwari havana kumurumbidza saMwari kana kumutenda asi kufunga kwavo hakuna zvakwakabatsira. Pfungwa dzavo dzisina maturo dzakadzimaidzwa.
Mbiri yaMwari asingafi vakaitsinhanisa nezvifananidzo zvakaita savanhu zvavo vanofa kana seshiri kana somhuka kana sezvinozvova napasi.
Naizvozvo Mwari akavarega kuti vaite madiro avo nehavi dzavo dzounzenza zvichivasvitsa mukuitirana zvinonyadzisa nemiviri yavo.
Nokuti vakatsinhanisa chokwadi chaMwari nenhema. Vakanamata vakashandira chisikwa panokunamata nokushandira musiki anofanira kurumbidzwa nokusingaperi Ameni.
Nokuda kwaizvozvi Mwari akavarega kuti vaite madiro avo votungamirirwa nehavi dzavo dzinonyadzisa. Vakadzi vavo vakasandura maitiro anofambirana nomusikirwo wavakaitwa savanhukadzi voita zvisingafambirani nomusikirwo wavo.
Saizvozvo nokuti havana kuona chiri chinhu chinokodzera kuti vazive Mwari; Mwari akavaregawo vachiva nepfungwa yakaora nokusazvibata.
namakuhwa, nokuva vanhu vanovenga Mwari navanozvikudza navanozvirova dundundu navanozvitutumadza navane rubatabata,
Kunyange zvazvo vachiziva chirevo chaMwari chinoti vanoita zvakadaro vanofanira kufa, havangoita izvozvo chete asi kuti vanotobvumirana navanoita izvozvo.
Tinonyatsoziva kuti Mwari, kutongera mhosva kwaanoita vanhu vanoita zvakadai, kuri pamwero.
Nhaiwe, munhuwo zvako kudai, unofunga here kuti uchapunyuka kutongerwa mhosva naMwari kana iwe uchitongera vamwe mhosva vanoita zvakadaro asi iwe pachako uchizviitawo?
Kana kuti wavakungoti Mwari zvaakazara nomwoyochena nokuregerera nomwoyo murefu, ndizvozvo? Hauzivi here kuti mwoyochena waMwari unenge uchiitirwa kuti iwe upinduke?
Asi nokuomarara mwoyo kwako uye nokuva nomwoyo usingadi kupinduka uri kutozozvimutsira hasha pamusi wehasha pacharatidzwa kutonga kwaMwari kwakarurama
nokuti Mwari haana rusaruro.
Vose vakatadza vasina mutemo vachapararawo kunze kwomutemo. Uye vose vakatadzira Mwari vari pasi pomutemo vachatongwawo nomutemo.
Chiripo ndechokuti havasi vanhu vanongonzwa mutemo vakarurama pamberi paMwari asi vanoita zvinorehwa nomutemo ndivo vachanzi vakarurama.
pazuva iroro, Mwari paanenge otonga zvakavandika zvavanhu nokuna Kristu Jesu maererano neShoko rangu Rakanaka.
Zvino kana iwe uchizviti uri muJudha uchivimba nomutemo, uchizvikudza noukama hwako naMwari,
Iwe unozvirova dundundu nezviri mumutemo ndiwe wondoshora Mwari nokutyora mutemo here?
Ndinodaro nokuti zvakanyorwa zvichinzi, “Zita raMwari rinoshorwa pakati pevechirudzi pamusana penyu.”
Zvakatowanda uye nenzira dzakasiyana — siyana. Pokutanga, vaJudha vakachengeteswa zvirevo zvaMwari.
Ko ngatitii vamwe vavo vakanga vasina kutendeka? Kusatendeka kwavo kunoshaisha basa kutendeka kwaMwari here?
Kwete, hazvidaro, Mwari anofanira kuva pachokwadi kunyange vanhu vose vakave venhema, sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, “Kana motaura, zvinobuda pachena kuti ndicho chokwadi kana mukapinzwa dare munobuda musina mhosva.”
Ko zvino kana uipi huchiratidza ururami hwaMwari, zvino toti kudini? Tingati Mwari akaipa here kana otiranga (ndiri kutaura somunhu?)
Kwete, handizvo, nokuti pakadaro Mwari aizotonga pasi sei?
Ko zvino kana nhema dzangu dzichiita kuti chokwadi chaMwari chinyatsobuda pachena, zvichiita kuti Mwari arumbidzwe, chandinopirwa mhosva yokuti ndiri mutadzi chii?
Hakuna anonzwisisa hakuna anotsvaka Mwari.
Mwari havambomuona kuti chii.”
Zvino tinoziva kuti chose chinotaurwa nomutemo chinonanga avo vari pasi pomutemo iwoyo kuti pasave naanombopati bufu kuti pasi pabvume muteto pana Mwari
Zvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa pachena zvisinei nomutemo kunyange zvazvo mutemo navaporofita zvichiupupurira.
nokuti munhu wose akatadza akakundika kusvika panodiwa naMwari kuti aponeswe.
Mwari akaronga kuti neropa rake ave ndiye wokuripira naye zvitadzo zvichiitika pamusana pechitendero. Izvi zvakaitirwa kuti kururama kwaMwari kuratidzwe pachena nokuti pamusana pemwoyo murefu wake zvitadzo zvakare akazviti zvingopfuura zvazvo
Kana kuti tingati Mwari ndiMwari wavaJudha voga here? Haasi Mwariwo wevechirudzi here? Hongu ndiMwariwo wevechirudzi,
Mwari zvaari mumwechete; uye anoruramisa nechitendero chavo vakadzingiswa, anoruramisawo nechitendero chavo, avo vasina kudzingiswa.
Dai kuri kuti Abhurahamu akaruramiswa namabasa, angadai aine chokuzvirumbidza nacho, asi kwete pamberi paMwari.
Ko Magwaro Matsvene anotii, “Anoti: Abhurahamu akatenda muna Mwari zvikaita kuti anzi akarurama.”
Asi kumunhu asina mabasa asi achivimba nouyo anoruramisa vasiri vanamati vaMwari, chitendero chake chinoita kuti anzi akarurama.
Saizvozvo Dhavhidhi anoti akakomborerwa zvake munhu anonzi naMwari akarurama iye asina mabasa aakaita achiti,
sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, “Ndakakuita baba wamarudzi mazhinji.” Abhurahamu akava nechitendero pamberi paMwari anomutsa vakafa uye anosika zvinhu zvisati zvambovapo.
Hapana kusavimba naMwari kwakamboita kuti vakahadzike nezvechitsidzo chaMwari asi vakasimbiswa muchitendero chavo, vakapa mbiri kuna Mwari.
Vainyatsoziva kuti Mwari anogona kuita zvaakatsidza.
Kristu akatifira panguva kwayo tisina simba isu; ipapo tisiri vanamati vaMwari.
Zvino zvatakaruramiswa neropa rake tichanunurwa zvikuru sei kuchirango chaMwari.
Saizvozvowo kana taive mhandu, takawadzana naMwari pamusana porufu rwaMwanakomana wake, tichaponeswa zvikuru sei noupenyu hwake zvino patakawadzana naye kudai.
Nokufa kwaakaita, kuchitadzo, akava munhu akafa chakamwe asi upenyu hwake iye zvino anoraramira Mwari.
Naizvozvo imiwo munofanira kuzviona kuti, kuchitadzo muri vanhu vakafa; asi Mwari ari iye upenyu hwenyu muna Kristu Jesu.
Musape nhengo dzenyu kuti dzishandiswe kutadza semidziyo yokuita nayo zvakaipa asi zvipei kuna Mwari savanhu vakabviswa murufu vachiendeswa kuupenyu mupe nhengo dzenyu kuna Mwari semidziyo yokushandisa mune zvakarurama.
Asi tinotenda Mwari kuti, imi makambenge muri varanda vechitadzo, mava kuteerera nemwoyo wose chidzidziso chiri pamwero chamakazvipira kwachiri.
Zvino zvamakasunungurwa muchitadzo mukava varanda vaMwari, mubayiro wamunowana kuitwa vatsvene. Uye mugumo wazvo upenyu usingaperi
Saizvozvowo, hama dzangu, imi pamusana pokuva vamwe nomuviri waJesu, kumutemo muri vanhu vakafa, kuti muve womumwe, iye akamutswa kuvakafa kuti tiberekere Mwari muchero.
Zviripo ndezvokuti, ini mukatikati mangu chaimo, ndinofarira mutemo waMwari.
Mwari, nokutumira kwaakaita mwana wake pachake akafanana navanhu venyama uye sechibayiro chezvitadzo, akaita zvisina kukwanisika kuitwa nomutemo pamusana poutera hwavanhu, zvokuti akatongera chitadzo chiri muvanhu mhosva yokuparadzwa.
nokuti mwoyo wakapindwa nezvenyama unovengana naMwari, hauzviisi pasi pomutemo waMwari. Izvo zviri izvowo, haungakwanisi kuita saizvozvo.
Avo vanoda kuzvifadza nyama dzavo havagoni kufadza Mwari.
Zvino kana tiri vana, tiri vagari venhaka. Tiri vagari venhaka yaMwari uye vagari venhaka pamwe naKristu. Ndokunge tambotambudzikawo pamwechete naye kuti tigozorumbidzwa pamwe naye.
Zvisikwa zvose zviri kumirira zvichisuwira kwazvo kuratidzwa kwavana vaMwari,
Chikonzero ndechokuti zvisikwa pachazvo zvichasunungurwa muuranda hwokuora zvichiwana rusununguko rune mbiri rwavana vaMwari.
Ko zvino totiiko nezvakadai izvi. Ko Mwari zvaari kudivi kwedu, ndiani angatirwise
Zvino ndiani angape mhosva vasarudzwi vaMwari, Mwari zvaari iye anoruramisa.
kana urefu kana kukwira mudenga kana udziki pasi kana chimwe zvacho muzvisikwa zvose chinogona kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Tenzi wedu.
Ndivo vechizvarwa chamadzitateguru aya parudzi rwavo uye pamazvarirwo anoitwa vanhu, ndikowo kwakabva Kristu. Iye Mwari anotonga vose ngaarumbidzwe nokusingaperi.
Hakusi kuti izwi raMwari rakakundikana nokuti havasi vose vechizvarwa chaIsiraeri vari vaIsiraeri.
Zvichireva kuti vana vaMwari havasiri avo vechizvarwa chenyama asi kuti vana vechitsidzo ndivo vanonzi vana vake chaivo.
kunyange paakanga asati aberekwa asati amboita chakanaka kana chakaipa uye kuri kuti kusarudza kwaidiwa naMwari kuenderere mberi, kwete pamusana pamabasa asi pamusana pokudaidza kwake akataurirwa kuti,
Zvino totiiko, zvinoreva kuti Mwari ano rusaruro here? Kwete handizvo
Saizvozvo hazvinei nezvinodiwa nomunhu kana zvinoedzwa kuitwa nomunhu asi chinebasa itsitsi dzaMwari.
Asi iwe uri aniwo zvako munhuwo zvako kupindura Mwari. Chiumbwa chingati here kumuumbi wacho: “Wakandiumbirei zvakadai.”
Ndizvozvowo zvina Mwari, ko dai kuri kuti anoda zvake kuratidza hasha dzake nokuranga achiratidza simba rake iye achizvidzora zvake achiitira mwoyo murefu kwazvo midziyo inofanira kuparadzwa
Panzvimbo imwecheteyo pavakambonzi, “Hamusi vanhu vangu, vachanzi vana vaMwari mupenyu.”
Hama dzangu, chandinodisisa mumwoyo mangu chaizvo nomunamato wangu wandinovaitira kuna Mwari, ndowekuti vaponeswe.
Ndinovapupurira kuti vane shungu naMwari asi havana ruzivo,
nokuti nokusaziva kururamiswa kunobva kuna Mwari vakatsvaka nzira dzavo dzokururamiswa. Havana kutsvaka kururamiswa kunobva kuna Mwari.
nokuti kana ukataura nomuromo wako kuti Jesu ndiTenzi uchitenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa muvakafa uchaponeswa.
Zvino ndingati Mwari akaramba vanhu vake here? Kwete handizvo. Iyeniwo ndiri muIsiraeri, chizvarwa chaAbhurahamu, ndiri wedzinza rokwaBhenjamini.
Mwari haana kuramba vanhu vake vaakafanoziva.
Hamuzivisu zvinotaurwa naMagwaro Matsvene nezvaEriya zvaanokumbira Mwari kuti zviwire Isiraeri achiti, “Tenzi vanhu ava vakauraya vaporofita venyu. Vakapaza atari dzenyu. Ini ndoga ndini ndasara uye vari kuda kutondipedzisa.”
Asi Mwari anomupindura achitii? “Ndakazvichengetera zviuru zvinomwe zvavarume vasina kupfugamira Bhaari.
Sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, “Mwari akavapa mwoyo wenhinhi namaziso okuti vasaone nenzeve dzokuti vasanzwe. Kusvikira pari nhasi.”
nokuti kana Mwari asina kurega mapazi epo aripo haamboregawo iwe uripo.
Saka iwe chinyatsoona mwoyochena nokuoma kwaMwari. Kuomesa mwoyo kwake kuna vakatadza nemwoyochena waMwari kwauri, ndokunge chete mwoyochena waMwari waramba uinewe. Pasina izvozvo kana iwe unodimurwawo.
Kunyange vaJudha vaya kana vakarega kurambirira mukusatenda kwavo, vanorumatidzwa pakare nokuti Mwari ane simba rokuvarumatidza zvakare.
Ndinodaro nokuti kana imi makadimurwa pamuorivhi, muorivhi womusango zvawo muchizorumatidzwa zvisiri zvinoitika pamakuriro ezvinhu uchirumatidzwa nomugirepisi unorimwa mumunda, ko zvinova nyore zvakadii kuti mapazi epo chaiwo arumatidzwezve pamigirepisi yawo. TSITSI DZAMWARI KUVANHU VOSE.
Naizvozvo Isiraeri yose ichaponeswa sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, “Mununuri achabva kuZioni achaparadza kusanamata Mwari kose muna Jakobho.
Pane zveShoko Rakanaka, imhandu dzaMwari kuitira imi, asi pane zvokusarudzwa ndavapamwoyo, pamusana pamadzitateguru avo
nokuti zvipo zvaMwari nokudaidza kwake ipfirapo.
Sezvamakangoita imi kuti makambova vanhu vasingateereri Mwari asi zvino makaitirwa tsitsi pamusana pokusateerera kwavo,
Ndinodaro nokuti Mwari akaisa vanhu vose mukusateerera kuti anzwire vose tsitsi.
Aiwaiwa hakusi kudzama kwakaita upfumi noungwaru noruzivo rwaMwari! Hakusi kusabatika ikoko kwamazano ake nokusarondeka kwakaita nzira dzake!
Musatevedzere zvenyika asi vandudzwai muve vatsva mupfungwa dzenyu kuti munyatsoziva kuti zvinoda Mwari ndezvipi uye kuti zvakanaka ndezvipi zvinofadza Mwari uye zvakaruramisisa.
Munhu wose ngaave pasi pehurumende inenge ichitonga nokuti hapana simba rokutonga risingabvi kuna Mwari. Vari kutonga vakatoiswapo naMwari.
Saizvozvo munhu anoramba kuteerera vatongi, anoramba kuteerera vakagadzwa naMwari. Vanorambawo kuteerera vacharangwa.
Naizvozvo kuzviisa pasi kuya kunofanira kuitwa kwete kunzvenga chete kuranga kwaMwari asi nokuda kokuterera hana yako.
Munoripa mutero nechikonzero chimwechetecho nokuti vatongi vashandi vaMwari vanoita basa irori.
Anodya chinhu ngaarege kushora uyo asingadyi. Asingadyi uya ngaarege kupa mhosva uya anodya zvake nokuti Mwari anomugamuchira.
nokuti anochengeta zuva anochengeta achikudza Tenzi. Anodyawo anodya achikudza Tenzi nokuti anotenda Mwari. Uyewo uyo asingadyi anorega pamusana pokukudza Tenzi achitenda Mwari.
Unopireiko hama yako mhosva! Ko iwewo unoshorerei mumwe wako! Iyesu tose tichandomira pamberi pechigaro chokutonga chaMwari,
nokuti zvakanyorwa zvichinzi, “Hezvino ndakadai, ndizvo zviri kutaura Tenzi, ibvi rose richandigwadamira uye rurimi rwose rucharumbidza Mwari.”
Naizvozvo mumwe nomumwe wedu achandozvidavirira pana Mwari.
Munhu anoshandira Kristu zvakadai, munhu anofadza Mwari uye anodiwawo navanhu.
Musaparadze basa raMwari pamusana pezvokudya. Chokudya chose chakanaka asi hazvina kunaka kuti munhu aite kuti vamwe vatadze pamusana pezvaanodya.
Chitendero chaunacho ngachive chako iwe naMwari pahuviri hwenyu. Akakomborerwa munhu asingazvipi mhosva kana aita zvaanga anyatsofunga kuita.
Dai Mwari anotsungisa uye anokurudzira vanhu angoita kuti mugarisane zvakanaka, zvinowirirana naKristu Jesu
Naizvozvo gamuchiranai sokugamuchirwa kwamakaitwa naKristu kuti Mwari arumbidzwe.
Zvandiri kureva ndezvokuti Kristu akava muranda kuna vakadzingiswa kuratidza chokwadi chaMwari kuti asimbisise zvitsidzo zvakaitwa kumadzitateguru
uye kuti vechirudzi varumbidze Mwari nokuda kwengoni dzake, sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, “Saizvozvo ndichakurumbidzai mukati mevechirudzi uye ndichaimbira zita renyu.”
Asi pane dzimwe nyaya dzandakakunyorerai nechivindi chaicho ndichikuyeuchidzai pamusana pechipo chandakapiwa naMwari
Naizvozvo muna Kristu Jesu, ndinozvidadisa nebasa randinoitira Mwari.
Ndikwazisireiwo Ambiriatusi shamwari yangu yapamwoyo muna Kristu.
Uye nezvakanyorwa navaporofita zvikazoziviswa kumarudzi ose maererano nezvakanzi naMwari wokusingaperi ngazviziviswe kuti kuve nokuteerera kunounzwa nechitendero.
Ini Pauro ndakadaidzwa kuti ndive mupositori waKristu Jesu, chiri chido chaMwari, ndinokunyorerai ini pamwechete nehama Sositenesi,
imi vesangano raMwari riri kuKorinde, rinemi vanhu vakaitwa vatsvene muna Kristu Jesu, imi makadaidzwa kuva varurami pamwechete navose vanodaidzira kose kose muzita raTenzi wedu Jesu Kristu, Tenzi wavo neweduwo.
Mwari akatendeka. Ndiye akakukokai kuti muve noruwadzano naMwanakomana wake Jesu Kristu Tenzi wedu.
1 VaKorinte 1:14
Ndinotenda Mwari kuti handina mumwe wenyu wandakaombeka kusiya Krisiposi naGayosi
1 VaKorinte 1:18
Zvinoreva muchinjikwa, ndezvoupenzi kuna vakananga kundoparadzwa asi kunesu vari kundoponeswa, isimba raMwari
1 VaKorinte 1:20
Mungwaru achazova papi ipapa? Zvino iyo nyanzvi yomutemo ichavapapi? Nyanzvi dzokufunga dzomukore uno dzichazova papi ipapo? Mwari haana kuita kuti ungwaru hwapasi pano, huve upenzi here?
1 VaKorinte 1:21
Nokuti ungwaru hwaMwari ihoho hwakaita kuti vanhu vasazive Mwari noungwaru hwavo. Uye zvakafadza Mwari kuponesa vanotenda, vachibatsirwa nezvoupenzi zvatinoparidza.
1 VaKorinte 1:24
Kuna vakadaidzwa zvavo, vangave vaJudha kana vaGiriki, tinoparidza Kristu, iye simba raMwari noungwaru hwaMwari.
1 VaKorinte 1:25
Upenzi hwaMwari ungwaru kupinda ungwaru hwavanhu uye utera hwaMwari hune simba kupinda ravanhu.
1 VaKorinte 1:27
Asi Mwari akasarudza vanoonekwa nenyika samazungairwa kuti anyadzise vangwaru. Mwari akasarudza vanoonekwa nenyika savasina simba kunyadzisa vakasimba.
1 VaKorinte 1:28
Mwari akasarudza vanoonekwa savapasi pasi navanhu vakazvidzika panyika kuti zvinonzi ndizvo zvinhu kwazvo zvive zvenhando
1 VaKorinte 1:29
kuitirawo kuti pashaye munhu anozvikudza pamberi paMwari.
Kuna Mwari ndiko kunobva upenyu hwenyu muna Kristu Jesu waakaita kuti ave ndiye ungwaru hwedu, uye kuti ave ndiye anotiruramisa, anotiita vatsvene nokuva rudzikinuro rwedu.
1 VaKorinte 2:1
Kunyange ini pandakauya kwamuri hama dzangu, handina kuuya ndichikuparidzai chakavandika chaMwari ndichishandisa mazwi akadzama kana oungwaru hunoshamisa.
kuti musimboti wechitendero chenyu urege kuva ungwaru hwavanhu asi simba raMwari.
1 VaKorinte 2:7
Tinoparidza chakavandika uye ungwaru hwaMwari hwakavandika hwakatemwa naMwari pasi pasati pavapo kuti tizopenyeswa.
1 VaKorinte 2:9
Asi sokunyorwa kwazvakaitwa zvinonzi, “Mwari zvaakagadzirira vanomuda hapana ziso rati razviona kana nzeve yati yazvinzwa kana munhu ati ambozviisa mupfungwa.
1 VaKorinte 3:6
Ini ndakadyara, Aporosi akadiridza asi Mwari ndiye akaita kuti zvikure.
1 VaKorinte 3:7
Saka anodyara naanodiridza hapana zvavari asi Mwari ndiye chete anoita kuti zvikure.
1 VaKorinte 3:8
Anodyara naanodiridza vakangoenzana. Mumwe nomumwe wavo achagamuchira mubayiro wake sokushanda kwaakaita nokuti tiri vashandipamwe vaMwari.
1 VaKorinte 3:9
Imi muri munda waMwari, imba yaMwari.
1 VaKorinte 3:17
Nezvo ani naani anoparadza Temberi yaMwari, Mwari achamuparadza nokuti Temberi yaMwari inoera. Temberi yacho ndimi.
1 VaKorinte 3:19
Ndinodaro nokuti, ungwaru hwapasi pano, kuna mwari hupenzi sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, “Anokachikira wakangwara muhumenemene hwavo ihwohwo.
1 VaKorinte 3:23
Imiwo muri vanhu vaKristu Kristu ndewaMwari.”
1 VaKorinte 4:1
Saizvozvo munhu ngaatitore savaranda vaKristu, vatariri vezvakavanzika zvaMwari.
Nokudaro regai kupa munhu mhosva nguva isati yasvika, Tenzi vasati vauya. Ndivo vachaburitsa pachena zvinhu zvakavandika murima iye zvino uye vachaburitsa pachena zvinangwa zviri mumwoyo. Ipapo munhu wose achapiwa kurumbidzwa kwake naMwari.
Ndinofunga kuti Mwari, isu vapositori, akatiisa kokupedzisira achitiratidza kunyika savanhu vanofanira kuuraiwa nokuti tatove chinhu chokuyevewa nenyika yose navatumwa navanhu.
1 VaKorinte 4:19
Asi ndichauya kwamuri nokukurumidza, kana Mwari achida, ndipo pandichanzwa kwete zvinotaurwa navanhu vanozvikudza ava asi kuti ndichaona simba ravanaro,
1 VaKorinte 4:20
nokuti umambo hwaMwari hakusi kungotaura chete asi kuti isimba.
Hatisi kureva vounzenza vose vose vapanyika kana vanoruchiva namakororo kana vanonamata zvinhu zvisiri Mwari nokuti mungatofanira kubva pasi pano.
Asiwo zvandakakunyorerai ndezvokuti murege kufambidzana nani zvake anodaidzwa kunzi hama muna Kristu kana ane mhosva younzenza kana yoruchiva kana kuti munamati wezvisiri Mwari kana munyombi kana chidhakwa kana gororo kana kumbodya nomunhu akadaro.
1 VaKorinte 5:13
Mwari ndiye anotonga vari kunze. Dzingai munhu uyo akaipa pakati penyu.
1 VaKorinte 6:10
kana mbavha, kana vano ruchiva, kana zvidhakwa kana vanyombi kana makororo vanokwanisa kupinda muumambo hwaMwari.
1 VaKorinte 6:13
Chokudya chakaitirwa dumbu dumbu rakaitirwa chokudya. Asi Mwari achazviparadza zvose zviri zviviri Muviri hausi wounzenza asi ndowaTenzi, Tenziwo ndewe muviri
1 VaKorinte 6:14
Mwari akamutsa Tenzi uye achatimutsawo nesimba rake.
1 VaKorinte 6:20
Makatengwa nomutengo. Naizvozvo rumbidzai Mwari mumuviri wenyu.
1 VaKorinte 7:7
Ini ndingatoda kuti dai vanhu vose vakaita zvandakaita ini. Zvakadaro zvazvo, vanhu vose vakapiwa zvipo zvakasiyana — siyana, munhu nomunhu achipiwa naMwari chipo chisina vamwe.
1 VaKorinte 7:17
Chiripo zvacho ndechokuti munhu wose ngaagare upenyu hwaakapiwa naTenzi uye hwaakadaidzirwa naMwari. Iwoyo ndiwo mutemo wangu mumasangano ose.
1 VaKorinte 7:19
Kudzingiswa kana kusadzingiswa hakuna zvakunoreva asi kuchengeta mitemo yaMwari.
1 VaKorinte 7:24
Naizvozvo hama dzangu munhu zvaakadaidzwa naMwari akaita, ngaarambe akaita saizvozvo.
1 VaKorinte 8:1
Panyaya yechokudya chakapirwa kuna vamwari vasirivo tinoziva kuti tose tine ruzivo nazvo. Ruzivo runotutumadza munhu asi rudo ndirwo runovaka munhu.
1 VaKorinte 8:3
Asi kana munhu achida Mwari, anozivikanwawo naye.
1 VaKorinte 8:4
Saizvozvo pane zvechokudya chakapirwa kunavamwari vasirivo, tinoziva kuti pasi pano chinonzi mwari asiri iye hakuna uye kuti hakuna mumwe mwari kusiya mumwechete.
1 VaKorinte 8:5
Kunyange variko zvavo vanonzi vamwari kudenga kana panyika varikowo zvechokwadi vanonzi vamwari vakawanda navanonzi vanatenzi vakawanda.
Asi kwatiri isu, kunongova naMwari mumwechete Baba kwakabva zvinhu zvose. Ndiyewo watakasikirwa naTenzi mumwechete Jesu Kristu. Zvinhu zvose zvakasikwa nemaari iye kana iyesu takasikwa nemaari.
1 VaKorinte 8:7
Asi havasi vose vano ruzivo irworwo asi vamwe nokutojairirana navamwari vasirivo, vanodya chokudya ichocho sokunge chakapirwa zvechokwadi kunamwari asiriye. Zvino pamusana pehana dzavo nhete vanobva vasvibiswa.
1 VaKorinte 8:8
Asi chokudya hachisvitsi munhu pedyo naMwari. Hapana chatinorasikirwa nacho kana tikarega zvedu kudya uyewo hapana chatinowana kana tikadya.
1 VaKorinte 8:10
Ndinodaro nokuti munhu akakuona iwe uno ruzivo uri pakudya mutemberi yavamwari vasiri ivo haazokurudzirwa here kana ari uya wehana nhete kuti adye chokudya chakapirwa kuna vamwari vasiri ivo?
1 VaKorinte 9:9
Ndinodaro nokuti zvakanyorwa mumutemo waMosesi zvichinzi, “Usaise dhonza matomu kana richitsokodzera mbeswa.” Mwari anongova nehanya namadhonza chete here?
1 VaKorinte 9:21
Kuna vari kunze komutemo ndakaita sendiri kunze komutemo asi kwete somunhu ari kunze komutemo kuna Mwari asi ndiri pasi pomutemo waKristu kuti ndiwane vari kunze komutemo.
1 VaKorinte 10:5
Asi Mwari haana kufadzwa navazhinji vavo nokuti vakaitwa gatakata kuraiwa murenje.
Musanamate vamwari vasirivo sezvakaita vamwe vavo. Ndokusaka zvakanyorwa zvichinzi: “Vanhu vakagara pasi vachidya nokunwa vakasimuka votamba.”
Naizvozvo, hama dzangu, siyanai nokunamata vamwari vasivo.
1 VaKorinte 10:19
Ko zvino ndiri kurevei nazvo? Ndiri kureva kuti chokudya chakapirwa kunavamwari vasivo chinhu chinebasa here? Kana kuti mwari asiriye chinhu here?
1 VaKorinte 10:30
Ko kana ndichitenda Mwari pakudya ndinopirwei mhosva chokudya chandinodya ndatenda?”
1 VaKorinte 10:31
Nokudaro kunyange ukadya kana kunwa kana kuita chimwe chinhu, zviite zvose kurumbidza Mwari.
1 VaKorinte 10:32
Asi usakanganise vaJudha kana vaGiriki kana Sangano raMwari.
1 VaKorinte 11:3
Asi ndinoda kuti muzive kuti Kristu ndiye musoro womurume oga oga, murumewo ndiye musoro womukadzi wake, Mwari ari iye musoro waKristu.
1 VaKorinte 11:12
Sokuitwa kwakaitwa mukadzi achibva kumurume saizvozvowo murume anoberekwa nomukadzi. Asi vose vanobva kuna Mwari.
1 VaKorinte 11:13
Munozvionawo sei, zvinokodzera here kuti mukadzi anamate kuna Mwari asina kufukidza musoro?
1 VaKorinte 11:16
Kana pane wenharo ndezvake; asi isu kana masangano aMwari hapana imwe tsika yatinoziva.
1 VaKorinte 11:22
Ndochii ichocho; hamuna dzimba dzokudyira nokunwira kana kuti kushora sangano raMwari here kana kuti kuda kudukupisa vasina chavanacho? Ndoti kudiiko kwamuri? Ndokurumbidzai here? Kwete handingakurumbidzei.
1 VaKorinte 12:2
Munonyatsoziva kuti pamakanga muchiri vahedheni makateteretswa kunavamwari vasingatauri zvisinei kuti makaendeswa ikoko sei.
1 VaKorinte 12:6
Kune mhando dzokushanda kwakasiyana — siyana asi Mwari ndiye mumwechete anozvifemera muna vose.
1 VaKorinte 12:18
Asi sezvazviri, iye zvino, Mwari akaronganisa mitezo yomuviri, mumwe nomumwe wayo sokuda kwake.
1 VaKorinte 12:24
zvisingadiwe nemitezo yedu isinganyadzisi. Asi Mwari akanyatsogadzira muviri, achipa rukudzo kune mutezo usina basa guru;
Mwari akapa vanhu mabasa musangano sezvizvi, vokutanga vapositori, vechipiri vaporofita, vetatu vadzidzisi kouya vaiti vezvishamiso koti varapi kozoti vabatsiri navafambisi vamabasa navatauri vendimi dzakasiyana — siyana.
1 VaKorinte 14:18
Ndinotenda Mwari kuti ndinotaura nendimi dzisingazivikanwi kupfuura imi mose.
Zvakavandika zviri mumwoyo make zvinobuda pachena naizvozvo anowira pasi nouso achinamata Mwari achitaura pachena kuti Mwari ari pakati penyu.
1 VaKorinte 14:28
Kana pasina anoturikira, vose ngavanyarare musangano, munhu achizvitaurira iye pachake uye achitaura kuna Mwari.
1 VaKorinte 14:36
Ko kutaura here ikoko? Ko iro shoko raMwari rakabva kwamuri here? Rakangosvika kwamuri moga here?
1 VaKorinte 15:9
Chikonzero chacho ndechokuti ini ndiri wokupedzisira kuvapositori, ndisingakodzeri kudaidzwa kunzi mupositori nokuti ndakashusha sangano raMwari.
1 VaKorinte 15:15
Isu tinobva taonekwa kuti tiri kurevera Mwari nhema nokuti takapupurira Mwari kuti akamutsa Kristu waasina kumutsa kana chiri chokwadi kuti vakafa havamutswi.
1 VaKorinte 15:25
Nokuti Kristu anofanira kutonga kusvikira Mwari aisa vavengi vake vose pasi petsoka dzake.
1 VaKorinte 15:27
Nokuti zvinonzi, “Mwari akaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake.” Zvino kana zvichinzi zvinhu zvose zvakaiswa pasi pake, zviri pachena kuti hazvibatanidziri naiye, Mwari akaisa zvinhu zvose pasi pake.
1 VaKorinte 15:28
Kana zvinhu zvose zvaiswa pasi pake nezvo Mwanakomana pachakewo achava pasi pouyo akaisa zvinhu zvose pasi pake kuti Mwari ave Mwari wazvose muna zvose.
1 VaKorinte 15:33
Musanyengedzwe zvenyu, shamwari dzakaipa dzinoparadza hunhu.
1 VaKorinte 15:34
Nyatsofungai, musiyane nezvitadzo nokuti vamwe havazivi Mwari. Ndinotaura izvi kuti munyare.
1 VaKorinte 15:38
asi Mwari ndiye anochipa chimiro chacho pamadiro ake.
1 VaKorinte 15:50
Ndinokutaurirai izvi, hama dzangu, zvokuti, chakaitwa nenyama neropa hachikwanisi kuwana umambo hwaMwari uye chinofa hachigoni kuwana kusafa.
Mwari ngaatendwe anoita kuti tikunde nokuna Tenzi wedu Jesu Kristu.
1 VaKorinte 16:1
Panyaya yezvipo zvinounganidzirwa vanhu vaMwari, sezvandakaudza masangano okuGaratia kuti aite, itaiwo saizvozvo.
1 VaKorinte 16:15
Ndinokukurudzirai hama dzangu, sezvamunoziva kuti mhuri yokwaStefanasi ndiyo yakatanga kupinduka muAkaya vakazvipira kushandira vanhu vaMwari
Ndini Pauro mupositori waKristu Jesu, ndakasarudzwa naMwari, ndinokunyorerai ini nehama yedu Timoti, imi vesangano raMwari riri kuKorinde pamwechete navatsvene vose vari muAkaya yose ndichiti
Ngaarumbidzwe Mwari Baba vaTenzi wedu Jesu Kristu, Baba vetsitsi, Mwari anonyaradza muna zvose,
2 VaKorinte 1:4
anotinyaradza mumatambudziko edu ose, kuti tikwanisewo kunyaradza vamwe vanenge vari mumatambudziko api naapi zvawo nokunyaradzwa ikoko kwatinenge taitwa naMwari.
Zvaitovapo ndezvokuti takatenge tavakuzviona savanhu vakatongerwa rufu, asi izvi zvakaitika kuti tirege kuvimba nezvatiri asi kuvimba naMwari anomutsa vakafa.
2 VaKorinte 1:18
NaMwari chaiye akatendeka, shoko redu kwamuri harina kunge riri hungu nakwete,
nokuti Jesu Kristu Mwanakomana waMwari watakaparidza pakati penyu, ini naSirivhanusi naTimoti, akanga asiri hungu nakwete. Maari maingova nahungu.
2 VaKorinte 1:20
Ndinodaro nokuti zvitsidzo zvose zvaMwari zvinowana hungu wazvo maari. Ndokusaka tichitaura kuti, “Ameni” nemaari kuti Mwari arumbidzwe.
2 VaKorinte 1:21
Mwari ndiye anoita kuti isu nemi tive nechokwadi muupenyu hwedu muna Kristu akatiita vaKristu.
2 VaKorinte 1:23
Mwari ngaandipupurire kuti chandakaregerera kuuya kuKorinde kwaiva kuti ndirege kukunetsai.
2 VaKorinte 2:14
Mwari ngaatendwe anoita kuti, muna Kristu tikurire nguva dzose uye nematiri anoparadzira kose vose kunhuwirira kwokuzivikanwa kwake.
2 VaKorinte 2:15
Iyesu ndisu kunhuwirira kwaKristu kuna Mwari pakati pavari kuponeswa napakati pavari kuparadzwa.
2 VaKorinte 2:17
Hatina kufanana navamwe vanoita shawo neShoko raMwari, asi tinoita savanhu vakatumwa vanotendeka pamberi paMwari tichitaura muna Kristu.
Ndicho chivimbo chatinacho naMwari nokuna Kristu.
2 VaKorinte 4:2
Takasarudza kusamboita zvinhu zvinonyadzisa nezvomuchivandevande. Takaramba kuita zvoujarijari kana kushatisa shoko raMwari. Asi tinozviratidza zvatiri kuhana yomunhu wose zvake takamira pachokwadi chizere pamberi paMwari.
Pane zvaivava, mwari wapasi pano akapofomadza pfungwa dzavasingatendi kuti varege kuona mwenje weShoko Rakanaka rembiri yaKristu, iye akatodzana naMwari.
nokuti iye Mwari ndiye akati, “Chiedza ngachivheneke murima,” ndiye akavhenekawo mumwoyo yedu, kuti atipe mwenje woruzivo rwembiri yaMwari iri muuso hwaKristu.
2 VaKorinte 4:7
Asi upfumi uhu tinaho huri muhari dzevhu, kuratidza kuti simba ramasimba ose nderaMwari, kwete redu.
2 VaKorinte 5:1
Isu tinoziva wani kuti kana muviri uno womusasa wapasi pano watigere wapazwa, tinowana imba inobva kuna Mwari isina kuvakwa namaoko avanhu inogara nokusingaperi kudenga.
2 VaKorinte 5:13
Kana tichiita setinorasa njere, tinozviitira Mwari uye kana tichiita savanhu kwavo tinoitira imi.
2 VaKorinte 5:18
Zvose izvi zvinobva kuna Mwari akatiwadzanisa naye nokuna Kristu akatipawo basa rokuwadzanisa
2 VaKorinte 5:19
zvinoreva kuti muna Kristu, Mwari akaita kuti pasi pawadzane naye, achirega kuvapa mhosva uye achitipawo shoko rokuwadzanisa.
2 VaKorinte 5:20
Naizvozvo tiri vamiririri vaKristu. Mwari anoisa chikumbiro chake nokwatiri. Tinokutetererai, takamirira Kristu tichiti, wadzanai naMwari.
2 VaKorinte 6:4
asi isu savaranda vaMwari tinoratidza izvi nenzira dzose nokutirira kwakaomarara nomukutambudzika mune zvinonetsa nomupfumvu
2 VaKorinte 6:7
nokutaura zviri pachokwadi nesimba raMwari nezvombo zvoururami kurudyi nokuruboshe,
2 VaKorinte 6:16
Temberi yaMwari inowirirana papi nezvifananidzo zvinonamatwa saMwari. Zvino isu tiri Temberi yaMwari mupenyu sokutaura kwakaita Mwari achiti, “Ndichagara mavari ndichifamba pakati pavo uye ndichava Mwari wavo ivowo vachava vanhu vangu.”
Asi, Mwari anonyaradza vanenge varasa mwoyo, akatinyaradza nokuuya kwaTitosi;
Sezvazviri ndinofara, kwete, nokuti makarwadziwa, asi pamusana pokuti makarwadziwa zvakakuitai kuti mupinduke nokuti kurwadziwa kwenyu kwaiva nohumwari makuri zvokuti hapana chatakaita kuti murasikirwe nacho.
Tarisai muone kuti shungu dzokurwadzirwa zvaMwari dzakakuberekerai chii mamuri, kuti makaita shungu dzakaita sei kuzvisasamura mhaka, kuti zvakakugumburai sei uye kuti zvakakutyisai zvakadii. Ndoda kudisisa kwenyu neshungu dzenyu uyezve chirango chacho! Aiwa, makaratidza, muna zvose, kuti hamuna mhosva panyaya iyi.
Naizvozvo, kunyange ndakakunyorerai zvangu, handina kukunyorerai pamusana pewakatadza uya kana kuti pamusana pouyo akatadzirwa asi kuti shungu dzenyu kwatiri dzibude pachena kwamuri pamberi paMwari.
2 VaKorinte 8:5
Izvozvo zvakanga zviri zvinhu zvatakanga tisingambotarisira asi vakatanga vazvipira kuna Mwari, mushure maizvozvo nokuda kwaMwari, vakazvipirawo kwatiri.
Mwari ngaatendwe akaita kuti Titosi ave nomwoyo wakaita sowangu pakuva nehanya nemi.
Mumwe nomumwe anofanira kuita sokuzvisarudzira kwaakaita mumwoyo make, kwete seasingadi kana seanomanikidzwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa achifara.
2 VaKorinte 9:10
Iye Mwari anopa mbeu kumudyari nechingwa chokudya ndiye achakupa mbeu dzose dzaunoda uye achaitawo kuti dzikure dzibereke zvokukohwa zvakawanda zvichibva muururami hwako.
2 VaKorinte 9:11
Muchapfuma muna zvose kuti mukwanise kuita mabasa makuru omwoyochena anoita kuti Mwari atendwe pamusana pezvatinenge taita.
2 VaKorinte 9:12
Kuita basa irori, hakungagutsi zvinodiwa navatsvene chete asi kuti kunowanziridza kutendwa kwaMwari.
2 VaKorinte 9:13
Nezvinobuda mukuita basa iri, mucharumbidza Mwari nokuteerera kwenyu Shoko Rakanaka raKristu nemwoyochena mukudyidzana kwenyu navo uye navamwe vose.
2 VaKorinte 9:15
Mwari ngaatendwe pamusana pechipo chake chisingatauriki.
nokuti zvombo zvatinorwisa nazvo, hazvisi zvapasi pano asi kuti zvine simba raMwari rinoparadza nhare dzokuzvidzivirira nadzo muhondo.
2 VaKorinte 10:5
Isu tinoparadza nharo uye pfungwa dzokuzvikudza dzinopingidza vanhu kuziva Mwari uye tinotora vanhu pfungwa dzavo tichidziisa muutapwa, tichivaita kuti vateerere Kristu
2 VaKorinte 10:13
Isu hatidi kuzvirova dundundu zvinopfuuridza asi tichamirira pamiganhu yatakaisirwa naMwari. Imi muri mukati memiganhu iyoyo.
2 VaKorinte 11:2
Ndine shanje yaMwari nemi nokuti ndakakuroodzai kuna Kristu, ndichida kukuperekai semhandara tsvene kumurume wayo mumwechete oga.
2 VaKorinte 11:7
Ndakatadza here nokuzvidukupisa kwandakaita kuti imi mukudzwe zvandakaparidza Shoko Rakanaka raMwari pasina chamakaripa?
2 VaKorinte 11:11
Nemhosva yeiko? Pamusana pokuti handikudei here? Mwari ndiye anoziva kuti ndinokudai.
Mwari naBaba waTenzi Jesu, iye anofanira kurumbidzwa nokusingaperi anoziva kuti handitauri nhema.
2 VaKorinte 12:2
Ndinoziva mumwe munhu muna Kristu akatututswa kuenda kudenga rechitatu makore gumi namana apfuura. Kuti akaendako nomuviri wake here kana kuti asina muviri wake, handizivi, Mwari ndiye anoziva.
2 VaKorinte 12:3
Chandinoziva ndechokuti munhu uyu akatututswa kuenda kuParadhiso. Kuti akaendako nomuviri wake here kana kuti asina muviri wake, handizivi, asi Mwari ndiye anoziva.
2 VaKorinte 12:19
Manga muchifunga here, pose apa, kuti tanga tichizvidzivirira kwamuri? Takanga tichitaura muna Kristu pamberi paMwari tichida kukuvakai, hama dzangu.
2 VaKorinte 12:21
Ndiri kuzeza kuti pandichauyazve, Mwari wangu achandininipisa pamberi penyu, ndavakuungudza ndichichema vazhinji vaya vakatadza vasati vapinduka kune zvakan'ora nounzenza noupombwe zvavakaita.
2 VaKorinte 13:4
Iye akarovererwa pamuchinjikwa muutera asi mupenyu nesimba raMwari. Nokudaro muchaona kuti isu tine utera pamwechete naye asi tichararama pamwechete naye nesimba raMwari.
2 VaKorinte 13:7
Tinonamata Mwari kuti murege kukanganisa, kwete kuti zvioneke kuti isu takabudirira asi kuti muite zvakarurama kunyange isu tichiita sokunge takakundika.
Ndini Pauro mupositori asina kutumwa basa iri nomunhu kana kuripiwa nomunhu asi akaripiwa naJesu Kristu uye naMwari Baba vakamumutsa muvafi,
Ndiye akazvipa pamusana pezvitadzo zvedu kuti atinunure kunyika youipi iripo iye zvino maererano nezvaidiwa naMwari naBaba vedu.
Asi munofunga kuti iye zvino ndiri kutsvaka kufadza vanhu here kana kuti ndiripo pakufadza Mwari? Kana kuti munoti ndiri kuvavarira kufadza vanhu? Kana ndichiripo kufadza vanhu handifaniri kuva muranda waKristu.
Inga makanzwa wani nezvoupenyu hwangu hwakare muchiJudha, kutambudza zvakaipisisa kwandaiita sangano raMwari ndichiedza kuriparadza.
NaMwari chaiye, zvandiri kukunyorerai handisi kunyepa.
Vakarumbidza Mwari nokuda kwangu.
Avo vainzi ndivo vakuru vakuru, zvavaiva zvakanga zvisina basa kwandiri nokuti Mwari haana rusaruro. Kwavari ndinoti ivavo vainzi ndivo vakuru vakuru hapana chavakandiwedzera,
Kuno mutemo, ndakangoita somunhu akafa kwauri kuti ndiraramire Mwari. Ndakarovererwa pamuchinjikwa pamwechete naKristu.
Handichisiri ini ndiri mupenyu asi kuti Kristu ndiye avakugara mandiri. Upenyu hwandinahwo somunhu ndinohugara pamusana pechitendero chandinacho muMwanakomana waMwari akandida akapira upenyu hwake nokuda kwangu.
Abhurahamu akatenda muna Mwari zvikamupa kunzi akarurama.
Magwaro Matsvene paakaona kuti Mwari anoruramisa marudzi nechitendero akafanoparidza Abhurahamu Shoko Rakanaka achiti, “Ndudzi dzose dzichakomborerwa pamusana pako.”
Zvino zviri pachena kuti hapana munhu anoruramiswa nomutemo pamberi paMwari nokuti munhu anenge akaruramiswa pamusana pechitendero achararama.
Izvi ndizvo zvandinoreva, kuti mutemo wakazouya mushure memakore mazana mana anamakumi matatu haudzimi chitenderano chakambonyoreranwa naMwari zvinoita kuti chitenderano ichocho chishaye basa.
Chandinodariro ndechokuti, kana nhaka iyoyo iri yokutevedza zvomumutemo haichisiri yechitsidzo. Asi Mwari akapa kuna Abhurahamu zviri zvechitsidzo.
Pano mumwechete asingadi munyai, Mwari chete.
Ko zvinoreva kuti mutemo unorwisana nezvitsidzo zvaMwari here? Hazvisizvo kwete. Dai kuri kuti pane mutemo wakatemwa unogona kupa upenyu, pakadaro ururami hungadai huchitounzwa nomutemo.
Nokuti muna Kristu Jesu, imi mose muri vana vaMwari nokuda kwechitendero.
Nezvo nokuna Mwari, hauchisiri muranda, wava mwana. Zvino kana uri mwana naizvozvo uri mugari wenhaka.
Kare pamakanga musingazivi Mwari maiva varanda vezvinhu zvisiri Mwari.
Kunyange zvazvo zvandaiva chaiva chiedzo kwamuri, hamuna kundisema kana kundishora asi makatondigamuchira sokunge ndaiva mutumwa waMwari, saKristu Jesu.
nokunamata zvinhu zvisiri Mwari kwoti kuroya nokuvengana kwozoti kunetsana, nokuitirana shanje kwouyawo hasha, nokungozvifunga, kwozotiwo kupesana nokuita mapato anovengana
uye kusafarira zvakanaka zvavamwe, uyezve kuraradza nokusazvibata kwezvidhakwa nezvimwe zvakadaro. Ndinokuyambirai sokukuyambirai kwandakamboita ndichiti vanoita zvakadai havawani nhaka youmambo hwamwari.
Musazvinyengedze nokuti Mwari haaitwi chiseko. Munhu zvaunodyara ndizvo zvaunokohwa.
Ndini Pauro ndakaitwa mupositori waKristu Jesu chiri chido chaMwari, ndinokunyorerai imi vatsvene uye vanhu vakatendeka muna Kristu Jesu.
Mwari, nechido chake, zvakamufadza kufanotisarudza nokuna Jesu Kristu kuti tive vana vake murudo,
handizorori kutenda Mwari pamusana penyu ndichikuyeukai muminamato yangu ndichiti,
Mwari akaisawo zvinhu zvose pasi petsoka dzake akamuita musoro wezvinhu zvose musangano
Asi Mwari, azere netsitsi, pamusana porudo rwake rukuru rwaakatida narwo,
nokuti tiri basa ramaoko ake, takasikwa muna Kristu Jesu kuti tiite mabasa akanaka akafanogadzirwa naMwari kuti tiatevedze.
Yeukai kuti panguva iyoyo imi makanga makaparadzana naKristu, muri vatorwa kumhuri yeIsiraeri makatsaurwa kuzvitenderano zvechipikirwa musina chitarisiro uye musina Mwari panyika.
Uye kuti nomuchinjikwa, atiwadzanise naMwari mumuviri mumwechete, nezvo achibva aparadza ruvengo.
Nezvo hamuchisiri vaenzi kana vatorwa asi mava vagari vomo pamwe navatsvene nenhengo dzemhuri yaMwari.
Nokuda kwaizvozvi ini Pauro, musungwa waKristu Jesu pamusana penyu imi vechirudzi, ndinonamata kuna Mwari.
uye kuti ndionese vanhu vose urongwa hwezvakavandika zvakanga zvakavanzwa kwezvizvarwa nezvizvarwa naMwari akasika zvinhu zvose
rudo rwaKristu runopfuura ruzivo kuti muzadzwe naMwari wose sezvaari.
Kuna Mwari mumwechete Baba vedu tose vari pamusoro pavose vanoshanda nomuna vose uye muna vose.
kuti vatsvene vawaniswe ruzivo rwebasa rezvokwaMwari kuti muviri waKristu uumbwe
kusvikira tose tave vamwechete muchitendero nomukuziva Mwanakomana waMwari kusvikira tave vanhu vabve zano kusvikira tava nechimiro chaKristu chizere.
Pfungwa dzavo dziri murima. Vakaparadzaniswa noupenyu hwaMwari pamusana pokushaya ruzivo kuri mavari nokuda kokuomarara kwavo komwoyo yavo.
mupfeke unhu hutsva hwakasikwa hwakatodzana naMwari muururami noutsvene huri pachokwadi.
Itiranai zvakanaka muve nomwoyo murefu muchiregererana sokuregererwa kwamakaitwa naMwari muna Kristu.
Naizvozvo savana vaMwari vapamwoyo, tevedzai zvinoita Mwari.
Garai upenyu hworudo sokutida kwakaita Kristu akazvipirira isu ari mupiro unonhuwirira nechibayiro kuna Mwari.
Chamunofanira kuva nechokwadi nacho ndechichi chokuti hakuna anowana nhaka youmambo hwaKristu nohwaMwari kana ari mhombwe kana anoita zvakaora kana munhu ana makaro, iyeyo ndiye munhu anonamata mwari asiri iye.
Musanyengedzwe nomunhu ana mazwi asina maturo nokuti pamusana paizvozvi Mwari anoitira hasha vanhu vasingateereri.
muchitenda Mwari Baba muzita raTenzi wedu Jesu Kristu nguva dzose uye muna zvose.
kwete zvechipameso zvokufadza vanhu asi savaranda vaKristu muchiita zvinodiwa naMwari nomwoyo wose.
Pfekai zvose zvokurwisa nazvo zvaMwari kuti mukwanise kumirisana namazano akaipa aDhiabhori
Naizvozvo torai zvose zvokurwisa nazvo zvaMwari kuti mukwanise kumira pazuva iroro rinenge rakaipa. Kana marwisa zvakaomarara zvazvo kudaro imi mucharamba makamira.
Ndinotenda Mwari wangu pose pandinokufungai uye nguva dzose
ndichitenda Mwari norubatsiro rwenyu muShoko Rakanaka, kubvira pazuva rokutanga kusvikira pari nhasi.
Mwari angatondipupurirawo kuti ndinokusuwai sei mose ndiine rudo runa Kristu Jesu.
makazadzwa nemichero yoururami inouya nokuna Jesu Kristu zvichipa mbiri norukudzo kuna Mwari.
Kuva mujeri kwangu kwakapa kuti ruzhinji rwevehama ruve nechivindi muna Tenzi uye vatova vanhu vasingambokatari zvavo kutaura Shoko raMwari.
Kunyange zvake akanga ari zvimwechetezvo naMwari, haana kuti ndoramba ndakangoomerana nokuenzana naMwari ikoko.
Naizvozvo Mwari akamusimudzirawo pamusorosoro akamupa zita rapamusorosoro kupfuura mazita ose;
uye kuti rurimi rumwe norumwe rutaure pachena kuti Jesu ndiTenzi kuitira kuti Mwari Baba varumbidzwe.
nokuti Mwari anoshanda mamuri kuti mude uye kuti mumushandire zvaanoda.
kuti muve vanhu vasina mhosva vasina chakaipa pavari, vana vaMwari vasina chavanopomerwa mukati mechizvarwa chavanhu vakakombama, vakashata mamunopenya sezviedza panyika.
Ichokwadiwo kuti airwara, zvokutoda kufa asi Mwari akamuitira tsitsi, kwete iye chete asi kana iniwo kuti ndirege kuva nenhamo pamusoro peimwe nhamo.
kuti ndiwanikwewo muna Kristu ndisina ururami hwangu pachangu hunobva mukuchengeta mutemo asi hunobva mukutenda kwangu muna Kristu, ururami hunobva kuna Mwari nechikonzero chechitendero ichocho.
Ndinoramba ndichingovavarira kusvika pakatarwa kuti ndiwane mubayiro wokumusoro unodaidzirwa naMwari muna Kristu Jesu.
Isu tabve zero ngativei nemwoyo iwoyo asi kana musina mwoyo wakadaro, Mwari achakuratidzaiwo pachena izvozvo.
Mugumo wavo kuparara. Mwari wavo inhumbu uye vanozvirumbidza nezvavanofanira kunyara nazvo, mwoyo yavo iri pane zvapano pasi.
Musazvidye mwoyo nechii chose zvacho; asi muna zvose, isai zvichemo zvenyu kuna Mwari nokunamata, nokuteterera nokutenda.
Makandiripa zvizere uye zvakapfuurikidza. Ndava nezvose pandadai kugamuchira kuna Epafurodhitusi zvipo zvamakanditumira, mupiro chaiwo, chibayiro chinogamuchirika chinofadza Mwari.
Mwari wedu naBaba ngavarumbidzwe narini narini. Ameni.
Ndini Pauro akaitwa mupositori waKristu Jesu nokuda kwaMwari naTimoti hama yedu
Tinotenda Mwari Baba vaTenzi wedu Jesu Kristu nguva dzose dzatinokunamatirai.
kuitira kuti mugare upenyu hunokodzerana naTenzi, hunomufadza zvizere huchibereka michero yakanaka mumabasa ose uyewo muchikurakura mukuziva kwenyu Mwari.
Ndiye mufananidzo waMwari asingaonekwi. Dangwe — rume rechisikwa chiri chose
nokuti maari, Mwari ndomaakasika namo zvinhu zvose, zviri pasi nezviri kudenga, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, kunyange vezvigaro zvokutonga kana voumambo kana kuti vane ukuru — ukuru kana madzishe. Zvinhu zvose zvakasikwa nemaari uyewo ndiye wazvakasikirwa.
nokuti maari umwari huzere hwakafadzwa kuita musha wahwo
Sangano iroro, ndiro randakava mushandiri waro maererano nomugove webasa randakapirwa imi naMwari kuti Shoko raMwari rizivikanwe zvizere.
Mwari akada zvake kuzivisa vechirudzi kuwanda kwakaita upfumi hwembiri yechakavandika chiya. Chakavandika chacho ndiKristu ari mamuri iye chitarisiro chembiri.
Ndinoita izvi kuti vakurudzirwe mwoyo vari murudo kuti vawane upfumi hwose hwokunzwisisa hunogadzanisa mwoyo uye kuti vawane ruzivo rwechakavandika chaMwari zvichireva iye Kristu.
Chikonzero ndechokuti umwari huzere hunogara maari sechinhu chaicho.
Makavigwa pamwechete naye mukuombekwa, imomo makamuka naye pamusana pechitendero chenyu mukushanda kunoita Mwari akamumutsa kuvafi.
Imi makanga makafa pamusana pezvikanganiso zvenyu nokusadzingiswa kwenyama yenyu, Mwari akaita kuti tive vapenyu pamwechete naye, iye atiregerera zvikanganiso zvedu zvose.
nokubatirira kumusoro unopa muviri wose chokudya uye unoubatanidza nenhengo namarunda unokura uchikuriswa naiye Mwari.
Zvino kana makamuka pamwechete naKristu kudai tswakai zviri kumusoro kuna Kristu kwaagere kurudyi rwaMwari.
Ndinodaro nokuti makafa uye kuti upenyu hwenyu hwakavigwa pamwechete naKristu muna Mwari.
Pamusana paizvozvi Mwari ari kuuya akashatirwa.
Naizvozvo imi vasarudzwi vaMwari, vatsvene vapamwoyo, pfekai tsika yemwoyo wetsitsi, nomwoyo wokuzvirereka, nomwoyo munyoro nomwoyo murefu,
Mutinamatirewo kuti Mwari atizarurire musuo weshoko kuti tiparidze zvakavandika zvaKristu. Ndiri muno mujeri pamusana pazvo
naJesu anonzi Jusutusi ivava ndivo chete vokudzingiswa pakati pavashandipamwe neni muumambo hwaMwari, ndivo vaindinyaradza.
Epafurasi, mumwe wenyu, muranda waKristu Jesu, ari kukukwazisai. Anokuyeukai nguva dzose mumunamato kuti muve vanhu vabve zano uye muchinyatsoziva zvose zvinodiwa naMwari.
1 VaTesaronika 1:2
Tinotenda Mwari nguva dzose pamusana penyu mose. Tinogara takakudomai muminamato yedu
tichiyeuka pana Mwari naBaba vedu basa renyu rechitenderano, nebasa renyu rorudo uye kutirira kwenyu muchitarisiro chamuinacho muna Tenzi wedu Jesu Kristu.
1 VaTesaronika 1:4
Tinoziva, hama dzangu, imi vadiwa vaMwari kuti Mwari akakusarudzai
Shoko raTenzi richibva kwamuri harina kungonzwika kuMasedhonia nokuAkaya koga asi chitendero chenyu muna Mwari chakasvika kose kose zvokuti hapana chatingataure.
1 VaTesaronika 1:9
Chiripo ndechokuti ivowo pachavo vanotaura kuti makatigamuchira zvakadii pakati penyu uye kuti makasiya zvokunamata mifananidzo muchipindukira kuna Mwari kuti munamate Mwari mupenyu wechokwadi,
uye kumirira kwamunoita Mwanakomana wake kubva kudenga iye waakamutsa kuvakafa, Jesu anotinunura kuhasha dzaMwari dziri kuuya.
Asi sokuonekwa kwatakaitwa naMwari kuti takakodzera kuti Shoko Rakanaka riiswe mumaoko medu, naizvozvo tinotaura kwete kuti tifadze vanhu, asi kuti tifadze Mwari anoongorora zvatiri.
1 VaTesaronika 2:5
Sezvamunoziva, hatina kushandisa mazwi okubata vanhu kumeso kana mazwi okufukidza kuda upfumi kwedu. Mwari angatipupurirewo.
1 VaTesaronika 2:8
Saizvozvo pamusana pokukudai zvakanyanya kwatinoita, hatina kungoda kuti tigoverane chete zveShoko Rakanaka raMwari, asi kuti tiitewo upenyu hwedu nemi nokuti imi makanga mava vapamwoyo chaivo kwatiri.
1 VaTesaronika 2:9
Hama, imi munoyeuka kushanda nokushingaira kwedu. Takashanda siku nesikati kuti tirege kuwana nomumwe wenyu watinoremedza patainge tichiparidza Shoko Rakanaka raMwari.
1 VaTesaronika 2:10
Imi, pamwechete naMwari, munotova zvapupu zvokuti maitiro edu kwamuri vatendi, takanga tiri vatsvene zvakadii, takarurama zvakadii tisina chatingapomerwe zvakadii.
1 VaTesaronika 2:12
ndakakukurudzirai mumwe nomumwe wenyu ndichikunyaradzai nokukukurudzirai kuti mugare upenyu hunokodzerana naMwari anokudaidzirai kuti mupinde muumambo hwake nomumbiri yake.
Tinotendawo Mwari nguva dzose pamusoro pezvizvi zvokuti pamakagashira shoko raMwari ramakanzwa kwatiri, hamuna kurigamuchira seshoko ravanhu, asi sezvariri, seshoko raMwari riri kushanda mamuri imi vatendi.
Imi hama, makasanganawo nezvakawira masangano aMwari okuJudhea muna Kristu Jesu nokuti imi makarwadziwawo nezvinhu zvakabva kuvanhu vomunyika menyu sezvavakaitwawo navaJudha.
Vakauraya Tenzi Jesu navaporofita uye vakatitandanisa; vanotsamwisa Mwari vachiita zvinorwisana navanhu vose
1 VaTesaronika 2:16
nokutidzivisa kutaura kune vechirudzi kuti vaponeswe. Naizvozvo vanotozadzikisa ukuru hwezvitadzo zvavo. Asi pokupedzisira Mwari avakuvavinga nehasha dzake.
Takatumira hama yedu Timoti muranda waMwari nomubatsiri wedu munezve Shoko Rakanaka raKristu kuzokusimbisai muchitendero chenyu uye kuzokukurudzirai.
1 VaTesaronika 3:9
Mwari tingamutende neiko nezvenyu pamusana perufaro rwose rwatinonzwa pamusoro penyu pamberi paMwari wedu
Dai Mwari wedu naBaba vedu pachavo naiye Tenzi wedu Jesu angotitungamirirawo nzira yedu kwamuri.
kuti asimbaradze mwoyo yenyu ive isina chinoshoreka pautsvene uye iri mitsvene pamberi paMwari wedu naBaba vedu pakuuya kwaTenzi wedu Jesu navatsvene vake vose.
Pokupedzisira hama dzangu, isu muna Tenzi Jesu tinokukumbirai tichikukurudzirai kuti sokudzidza kwamakaita kwatiri, mugariro wamunofanira kuita, mufadze Mwari, sezvamuri kungoita. Itai saizvozvo zviri zvakatowandisisa.
1 VaTesaronika 4:3
Izvi ndizvo zvinoda Mwari zvokuti imi muve vatsvene musiane noupombwe.
1 VaTesaronika 4:5
kwete nehavi dzomuviri dzoruchiva sezvinoita vechirudzi vasingazivi Mwari
1 VaTesaronika 4:7
Mwari haana kutidaidzira zvetsvina izvi asi zvoutsvene.
Panyaya yorudo navamwe vanamati, hazvimboda kuti munhu akunyorerei, nokuti imi pachenyu makadzidziswa naMwari kudana.
Sezvatinotenda kuti Jesu akafa akamukazve saizvozvowo, nokuna Jesu, Mwari achadzosa pamwe naye vakafa.
Mwari haana kutisikira kuti azotipa nhamo asi kuti tiwane ruponeso nokuna Tenzi wedu Jesu Kristu
uye muna zvose rambai muchingotenda nokuti uku ndiko kuda kwaMwari muna Kristu Jesu.
Ndini Pauro naSirivhanusi naTimoti tinokunyorerai imi sangano rokuTesaronika muna Mwari Baba vedu naTenzi Jesu Kristu.
Tinosungirwa kutenda Mwari nguva dzose pamusana penyu, hama dzangu, sechinhu chinokodzera kuitwa nokuti chitendero chenyu chiri kuramba chichingokura kwazvo uye kudanana kwenyu kuri kukura.
Naizvozvo isu pachedu tinodada nemi mumasangano aMwari nokuda kwokutsungirira kwenyu pakutenda mukutambudzwa kwenyu kose nenhamo dzamunotakurana nadzo.
2 VaTesaronika 1:5
Zvose izvozvi zvinoratidza kugona kutonga kwaMwari kuti imi munokodzera kupinda muumambo hwaMwari hwamuri kutamburira
2 VaTesaronika 1:6
uyewo nokuti Mwari anozviona chiri chinhu chinokodzera kutsividza nenhamo avo vanokutambudzai.
mumoto unonganduma. Achatsividza avo vasingazivi Mwari navavo vasingateereri Shoko Rakanaka raTenzi wedu Jesu.
Pamusana paizvozvi tinonamata nguva dzose kuti Mwari wedu aite kuti imi muve vanhu vakakodzera kukudaidzai kwaakaita uye kuti aite kuti zvakanaka zvamunoda kuita zvechitendero zvibudirire nesimba rake,
2 VaTesaronika 2:4
uya anozvikudza achirwisana nechose chinonzi mwari kana chipi zvacho chinonamatwa atoita chigaro chake mutemberi yaMwari.
2 VaTesaronika 2:11
Naizvozvo Mwari anovatumira zvinovabata kumeso kuti vatende zvenhema
Zvino Tenzi wedu Jesu Kristu pachake naMwari Baba vedu vakatida vakatipa kunyaradzwa kusina mugumo nechitarisiro chakanaka
Dai Tenzi angotungamirira mwoyo yenyu kurudo rwaMwari uye kuno kutirira kwaKristu.
Ndini Pauro mupositori waKristu Jesu sokutemwa kwazvakaitwa naMwari mununuri wedu uye naKristu Jesu, tariro yedu,
kana kudzidzisa ngano dzisina kwadzo nemirongorongo yamazita amadzitateguru nehurukuro dzisina kwadzinosvitsa panze pezvinangwa zvaMwari zviri muchitendero.
Asi chatinozivawo ndechokuti mutemo hauisirwi vakarurama asi unoisirwa vanhu vasina mutemo nenhubu navasina Mwari navatadzi, navasinei naMwari navanhu vasina matyira nezvinhu zvinoera nemhondi dzinouraya madzibaba
maererano neShoko Rakanaka rembiri raMwari wamakomborero rakaiswa mumaoko mangu.
Kukudzwa uye mbiri ngazvipiwe kuna Mambo wapasichigare narini narini kuna iye asingafi asingaoneki, anongova ndiye Mwari oga. Ameni.
Vamwe vavo ndavana Humenaosi naArekizanda vandakaturira kuna Satani kuti vadzidze kusashonha Mwari.
Izvi zvakanaka uye zvinogamuchirika pamberi paMwari noMununuri wedu
Nokuti kuna Mwari mumwechete uye kuno munhu mumwechete anobatanidza isu vanhu naMwari, munhu iyeyo ndiJesu Kristu.
asi zvishongo zvavo ngazvive mabasa akanaka sezvinokodzerana navakadzi vanotya Mwari.
Zviripo ndezvokuti kana munhu asingazivi kufambisa mhuri yake, angachengete sei sangano raMwari.
Asi kana ndikanonotswa, iwe unenge waziva kuti munhu anofanira kuzvibata sei mumhuri yaMwari, iro sangano raMwari mupenyu, musimboti nehwaro hwaicho chokwadi.
vanoti vanhu ngavarege kuroorana varege kudya zvimwe zvokudya zvakasikwa naMwari zvinofanira kugamuchirwa nokutenda navanhu vanodavira vachiziva chokwadi.
Chikonzero ndechokuti chinhu chose chakasikwa naMwari, chakanaka uye hapana chinofanira kurambwa asi ngachigamuchirwewo nokutendwa
pakadaro chinenge chatoyereswa neShoko raMwari nomunamato.
Siyana nengano dzisina Mwari uye dzisina musoro. Zvidzidzise kuita zvina Mwari mukati.
Kuzviswatudza muviri kune basawo asi kuzviswatudza kune zvaMwari kunobatsira nenzira dzose nokuti kunotsidzira mubayiro paupenyu hwapasi pano noupenyu hwokudenga.
Izvozvi ndizvo zvatinobindukira tichishingairira nokuti chitarisiro chedu chiri muna Mwari mupenyu, mununuri wavanhu vose zvikuru avo vanotenda.
Kana chirikadzi iina vana kana vazukuru ngavatange vadzidza basa ravo savanamati ravanofanira kuita kumhuri yavo vawane zvavanodzorerawo kuvabereki vavo nokuti izvi ndizvo zvinofadza Mwari.
Chirikadzi chaiyo yakasiiwa ichingova yoga yoga, inotarisira kuna Mwari, inoramba ichingokumbira ichinamata siku nesikati.
Pamberi paMwari uye pamberi paKristu Jesu napamberi penhumwa dzakasarudzwa, ndinokukomeresa kuti uchengete mitemo iyoyi usina kwaunorerekera kana rusaruro.
Vose vari mujoko rouranda vanofanira kuziva kuti vatenzi vavo vanofanira kupiwa rukudzo rwose kuti zita raMwari uye chidzidziso ichochi chirege kushorwa.
Kana munhu akadzidzisa zvimwewo asingawirirani namashoko ezvirokwazvo aTenzi wedu Jesu Kristu nechidzidziso chinowirirana nezvaMwari
nokukakavadzana pakati pavanhu vasina musoro vasina chokwadi vanofunga kuti kuitira Mwari basa chinhu chokuzvipfumisa nacho.
Hongu kuitira Mwari kunopfumisa ndokunge munhu achigutsikana nezvaanazvo
Asi iwe munhu waMwari siyana nezvinhu izvi. Vavarira ururami, kuzvipira kuna Mwari nechitendero norudo nokuva nemwoyo mumwechete nounyoro.
Pamberi paMwari anopa upenyu kuzvinhu zvose uye pamberi paKristu Jesu akapupura zvakanaka paumboo hwake pamberi paPontio Pirato,
Vapfumi vapasi pano, vataurire kuti varege kuzvitutumadza kana kuvimba noupfumi husina paho. Asi ngavavimbe naMwari anotifashurira zvose zvinotifadza.
Iwe Timoti chengetedza zvakaiswa mumaoko mako kuti uchengete. Siyana nokutaura kusinei naMwari zvinopesana nezvinenge zvichinzi ichokwadi izvo zvisiri chokwadi.
Ndini Pauro mupositori waJesu Kristu nokuda kwaMwari maererano nechitsidzo choupenyu huri muna Kristu Jesu
Ndinotenda Mwari wandinoshandira nemwoyo wakachena sezvakaitwa namadzibaba angu pandinokuyeuka nguva dzose muminamato yangu.
Naizvozvo ndinokuyeuchidza kuti ukuchidzirezve chipo chaMwari chiri mauri chawakawana nokukuisa maoko pamusoro kwandakuita
Saizvozvo usanyare kupupurira Tenzi wedu kana kundipupurirawo ini musungwa wake, nesimba raunopiwa naMwari. Chikonzero chiri chokuti utambudzikewo pamwechete neni pamusana peShoko Rakanaka
Dai Mwari angoitira veimba yaOnesiforusi tsitsi nokuti akandinyaradza kazhinji. Hazvaimbomunyadzisa kuti ini ndaiva muusungwa.
Edza napose paunogona kuva munhu anogamuchirika pana Mwari, mushandi asina chaanganyare nacho anoziva kushanda namagwaro matsvene echokwadi zvakanaka.
Siyana nehurukuro dzisina zvoumwari mukati nokuti zvinoramba zvongotungamirira vanhu mune zvisina umwari.
Asi hwaro hwaMwari hwakasimba hunoramba huripo hwakanyorwa kuti, “Tenzi anoziva avo,” uye kuti, “Munhu wose anodaidza zita raTenzi, ngaasiyane nouipi.”
anodzora vanorwisana naye nounyoro. Zvichida Mwari anovasvitsa pakutendeuka vakasvika pakuziva chokwadi
nokuti vanhu vachava vanhu vanozvida vanokara mari, vanozvikudza, vanozvitutumadza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingatendi, vasina hanya naMwari
navanhu vasingavimbiki, vanhu vasingabatiki pavo, vanozvitutumadza, vanoda mafaro kupinda Mwari
Vose vanoda upenyu hwokuzvipira kuna Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa
kuti munhu waMwari ave akakwana akagadzirira basa ripi neripi rakanaka.
Ndinokukomeresa pamberi paMwari uye pamberi paKristu Jesu achazotonga vapenyu navakafa, pamberi paiye achazozviratidza muumambo hwake.
Ndinotenda Mwari nguva dzose pandinokuyeuka muminamato yangu
nokuti ndinonzwa nezvorudo rwako kuvanhu vaMwari vose uye nechitendero chako chauinacho muna Tenzi Jesu.
nokuti ndakawana rufaro rwakawanda nokusimbaradzwa zvichibva murudo rwako, iwe hama yangu nokuti wakaita kuti mwoyo yavanhu vaMwari ifaranuke.
Karakare, Mwari aitaura kumadzitateguru edu kazhinji — zhinji, nenzirawo dzakasiyana — siyana nemiromo yavaporofita,
Ndiye anoratidza pachena mbiri yaMwari, ndiyezve mufananidzo chaiwo wamamiriro akaita Mwari, anochengetedza mumaoko ake zvisikwa zvose nezwi rake rinesimba. Paakapedza kuita basa rokuchenesa vanhu kuzvivi, akandogara kurudyi rwaSamasimbaose ari kumusorosoro,
Ndoupi mutumwa akambonzi naMwari; “Iwe uri Mwanakomana wangu, nhasi ndakubereka?” Kana kuti; “Ndichave baba kwaari, iye agove Mwanakomana kwandiri?”
Uyezve paakaunza dangwe rake pasi pose anoti, “Vatumwa vose vaMwari ngavamupfugamire kumunamata.”
NezvoMwanakomana anoti; “Chigaro chenyu choushe, imi Mwari, chinozoramba chiripo nokusingaperi. Uye tsvimbo yoruenzaniso ndiyo tsvimbo youmambo hwenyu.
“Imi makada ururami mukavenga unyangadzi, “Ndosaka Mwari, iye Mwari wenyu, akakugadzai ukuru pamusoro pavamwe venyu nokukuzodzai namafuta orufaro.
Mwari haana kuisa pasi pavatumwa nyika ichauya, yatiri kutaura nezvayo.
Napamwezve paanoti; “Ndichaisa chivimbo changu maari.” Pamwezve achiti; “Ndiri pano navana vaakandipa Mwari.”
Naizvozvo, aifanira kuva sehama dzake muna zvose, kuti ave mupristi mukuru ane tsitsi, anotendeseka mubasa raMwari, anoripirawo zvitadzo zvavanhu.
Aiva munhu wakatendeka kuna iye wakamusarudza; sokutendekawo kwakanga kwakaita Mosesi mumba maMwari.
Nokuti imba ipi neipi ine wakaivaka asi muvaki wezvinhu zvose ndiMwari.
Zvino Mosesi, somuranda akanga akatendeseka muimba yose yaMwari, achipa uchapupu hwezvinhu zvakanga zvichazotaurwa.
Asi Kristu, iye mukuru wemba yaMwari akatendeseka somwana. Ndisu iyesu imba yake, chero tikaramba tichingovimba chete, nokudada nechitarisiro chedu.
Chenjerai, hama dzangu, kuti munaani — nani wenyu murege kuva nemwoyo wakaipa usingatendi, ungadaro ukamutsautsa muna Mwari mupenyu.
Paripo pamwe paakataura nezvezuva rechinomwe achiti, “Zvino Mwari akazorora mabasa ake ose pamusi wechinomwe.”
Nokuti dai Joshuwa akanga avapa zororo, Mwari angadai asina kuzotaura pashure nezverimwe zuvazve.
Naizvozvo kuna vanhu vaMwari kuchine zororo rokusabata basa,
nokuti uyo anopinda muzororo raMwari anomira kuita mabasa ake sezvakaitwawo naMwari.
Naizvozvo, zvatiino mupristi mukuru wakapinda nomumatenga, iye Jesu Mwanakomana waMwari, ngatichibatisisai chitendero chedu.
Nokuti mupristi mukuru mumwe nomumwe anosarudzwa achibva mukati mavanhu kuti ashande akamirira vanhu pane zvinhu zvaMwari. Anogadzwa upristi kuti apire zvipo nezvibayiro zvekuripira zvitadzo.
Hakuna munhu anoita zvokuzvipa hukuru ihohu iye pachake, asi kuti anotodaidzwa naMwari sezvakaitwa Aroni.
Pamazuva ake paakanga achinomuviri wake, Jesu akanamata nokuteterera achichema kwazvo nezwi guru aine misodzi padama kuna iye aigona kumununura kurufu. Chichemo chake chakanzwika, nokuti aive ari anotya Mwari.
nokuti anotumidzwa naMwari kunzi mupristi mukuru wegovero raMerekizedheki.
nokuti kunyange zvazvo, parinhasi, muchifanira kunge matova vadzidzisi, mavakutoda mumwe anokudzidzisaizve zvidzidziso zvokutanga zvamashoko aMwari. Mavakutofanira kupihwa mukaka panze pokupihwa chokudya chakasimba.
Naizvozvo ngatichimbosiyai zvidzidzo zvechikristu zvokutanga, tiende mberi kuzvidzidzo zvechikuru, tirege kunge tichadzokerazve mukuvaka ugaro hwezvokupinduka kubva kumabasa akafa, nehwezvechitendero kuna Mwari kana kuti
Izvi tichazviita zvedu kana Mwari achitibvumira.
vakaravira kunaka kweShoko raMwari nesimba roupenyu huchauya,
asi vakazorasika; nokuti vanoroverera mavari ivo Mwanakomana waMwari pamuchinjikwa, vachimunyadzisa pachena.
Zvinodaro nokuti ivhu rinonwa mvura inowanzorinaya richizobereka zvirimwa zvinobatsira vazvakarimirwa, rinokomborerwa naMwari.
Mwari haakundiki paruenzaniso. Hazviitiki kuti akanganwe basa renyu norudo rwamakatira vatsvene pamusana pake, sezvamuchiri kungoita.
Ndinodaro nokuti zviya, Mwari zvaakatsidzirana naAbhurahamu akapika naiye pachake nokuti pakanga pasina mukuru pana iye waaigona kupika naye,
Naizvozvo Mwari paakanga achida kunyatsosimbisisa, kuvadyi venhaka yechipikirwa kuti zvaanenge atema hazvipinduki — pinduki akazvitsinhira nemhiko.
Uku kwaiva kuti nezvinhu zviviri zvisingasanduki isu vapoteri tiwane chingatikurudzire kubatisisa chitarisiro chatakapiwa nokuti mune zvizvi zviviri Mwari haagoni kutinyengedza kwete.
Nokuti iye Merekizedheki uyu, mambo weSaremu, mupristi waMwari Wokumusororo, akachingurana naAbhurahamu akanga achidzoka kubva kwaakanga andouraya madzimambo. Merekizedheki akakomborera Abhurahamu.
Haana baba; haana amai; haana dzinza; mazuva ake haana mavambo; upenyu hwake hauna mugumo; asi wakafanana noMwanakomana waMwari anoramba ari mupristi nokusingaperi.
(nokuti mutemo hauna chaunoruramisa) ukuwo uku kwakauya chitarisiro chitsva chiri nani chinotibatsira kuswedera kuna Mwari.”
Vamwe vakave vapristi pasina mhiko asi iye akave mupristi zvine mhiko. Uye akati kwaari nemhiko, “Mwari akapika uyezve haachasanduka, akati, ‘Uri mupristi nokusingaperi.’ ”
Naizvozvo, anogona kuponesa nguva dzose avo vanouya kuna Mwari nokwaari, nokuti mupenyu nguva dzose kuti avakumbirire.
Vanonamata muNzvimbo inoera inongova somufananidzo nomumvuri weiri kudenga nokuti Mosesi paakanga ava kuvaka tendhe akataurirwa naMwari achinzi, “Ona kuti waita zvose maererano nezvawakaratidzwa pagomo.”
Mwari anovapa mhosva paanoti, “Zvanzi naTenzi chionai mazuva achasvika andichaita chitenderano chitsva nemba yokwaIsiraeri nevemba yokwaJudha.
Ichi ndicho chitenderano chandichaita neveimba yokwaIsiraeri mushure mamazuva iwayo ndizvo zviri kutaura Tenzi. Ndichaisa mitemo yangu mupfungwa dzavo ndigoinyora mumwoyo mavo, ini ndichava Mwari wavo, ivowo vachava vanhu vangu.
Nokutaura nezvechitenderano chitsva, Mwari ari kutoita kuti chakare chinzi chitsaru. Chinhu chinenge chava kusakara, chavakuchembera chinobva chazorova.
Nokuti tende yakagadzirwa, yokunze, mairi maiva nechigadzikiro chemwenje netafura, nezvingwa zvakapirwa kuna Mwari, yainzi NzvimboTsvene.
“Iri iropa rechitenderano chamakatemerwa naMwari.”
Nokuti Kristu haana kupinda munzvimbo tsvene yakagadzirwa namaoko yakanga iri mufananidzo weiya yechokwadi asi akapinda mudenga chaimo imomo kuti iye zvino ave pana Mwari achimiririra isu.
Ndipo pandakati, ‘Mwari, tarisai muone ndauya kuzoita kuda kwenyu, sokunyorwa kwazvakaitwa nezvangu mubhuku rokumononora.’ ”
Asi Kristu paakapira nokusingaperi chibayiro chimwechete chokupfupira zvitadzo akandogara kurudyi rwaMwari
uye zvatino mupristi mukuru mutariri wemba yaMwari,
Chinhu chinotyisa kuwira mumaoko aMwari mupenyu.
Munofanira kutirira kuti muite kuda kwaMwari kuitirawo kuti mugamuchire zvakatsidzirwa zvinoti:
Nokuti nechitendero vanhu vakare vakanzi naMwari vanhu kwavo.
Pamusana pechitendero tinonzwisisa kuti nyika yakasikwa nezwi raMwari zvokuti zvinooneka zvakaitwa zvichibva mune zvisingaoneki.
Pamusana pechitendero Abhero akapira kuna Mwari chibayiro chinogamuchirika kupinda Kaini chakaita kuti anzi munhu akarurama Mwari achipupurira izvozvo nokugamuchira zvipo zvake. Akafa zvake asi nechitendero chake achiri kungotaura.
Pamusana pechitendero Enoki akatorwa achiendeswa kudenga nokuti Mwari akanga amutora nokuti asati atorwa akanga apupurirwa kuti akafadza Mwari.
Pasina chitendero hazvikwanisiki kumufadza nokuti munhu wose anouya anofanira kudavira kuti Mwari ariko uye kuti Mwari anopa mubayiro kune anomutsvaka.
Pamusana pechitendero, Nowa paakayambirwa naMwari nezvezvinhu zvakanga zvisati zvaoneka, akatirimuka akavaka ngarava kuti aponese mhuri yake. Naizvozvi akapa nyika mhosva. Akava mugari wenhaka yoururami inouya pamusana pechitendero.
Chikonzero ndechokuti aitarisira guta rine ugaro hwakasimba rakavakwa naMwari rakarongwa noumhizha hwake.
Asi sezvazviri vari kutosuwira nyika iri nani zvichireva nyika yokudenga. Ndokusaka Mwari asinganyari kunzi Mwari wavo nokuti akavagadzirira guta.
Akafunga kuti Mwari anokwanisa kumutsa vanhu kunyange kurufu. Naizvozvo pakutaura, tingati akamugamuchirazve.
Akatosarudza kuitirwa zvakaipa pamwechete navanhu vaMwari panze pokunakidzwa namafaro echitadzo.
nokuda kokuti Mwari akanga afanoona zviri nani kwatiri kuti havakwanisi kururamiswa vasinesu.
Ko munokanganwa here kukurudzirwa kuya; mukukurudzirwa mamunonzi vana? Mwanangu kana Mwari achikudzora rega kuzviona sechinhu chisina maturo kana kurasa mwoyo kana warangwa naye.
Tirirai zvinokutambudzai nokuti kana muchirangwa, Mwari anenge achikubatai savana. Nokuti ndibaba vapi vasingarangi mwana wavo.
kuti pasave naani zvake anoita zvounzenza kana asina hanya nokunamata Mwari sezvakaita Esau akatengesa utangwe hwake nokuda kwechokudya, chokudya kamwechete.
Asi imi makaswedera kugomo reZioni nokuguta raMwari mupenyu, kuJerusaremu rokudenga, nokuvatumwa vasingaverengeki vari pagungano rokufara
nokuti Mwari wedu moto unoparadza.
Usakarire mari. Gutsikana nezvaunazvo nokuti Mwari akati, “Handimbokushaisa chokubata kana kukusiya.”
Yeukai vatungamiri venyu vakakutaurirai shoko raMwari murangarire zvakaburwa muupenyu hwavo, mutevedzere chitendero chavo. Jesu Kristu ndiye mumwecheteyo nezuro nanhasi uno uye nokusingaperi.
Ngatirambei tichingopira nokwaari chibayiro chokurumbidza Mwari. Ndiwo muchero womuromo unopupura nezvezita rake.
Ndini Jemusi muranda waMwari uye waTenzi Jesu Kristu. Ndinokunyorerai imi marudzi gumi namaviri akapararira ndichiti kwaziwai.
Kana pane asina ungwaru ngaakumbire kuna Mwari, mupanegombe kuvanhu vose, anopa asingakonoreri; huchapiwa kwaari.
Akakombererwa zvake munhu anotirira chiedzo nokuti kana achinge akunda chiedzo anowana ngundu youpenyu yakatsidzirwa naMwari kuna vanomuda.
Ngaparege kuva nomunhu anoti kana aedzwa oti, “Mwari akandipinza muchiedzo” nokuti Mwari haagoni kuedzwa nouipi. Iyewo pachake haapinze munhu muchiedzo.
nokuti kushatirwa kwomunhu hakubatsiri kuti mugariro wohumwari wakarurama uitwe.
Magwaro Matsvene akabva azadziswa anoti, “Abhurahamu vakatenda muna Mwari zvikaita kuti anzi akarurama akanzi shamwari yaMwari.”
Tinorumbidza narwo Tenzi naBaba uye narwo tinorengerera vanhu rushambwa, vanhu vakasikwa vakafanana naMwari.
Vanhu vasingatendeki! Hamuzivi here kuti kushamwaridzana nenyika kunoita kuti muvengane naMwari? Naizvozvo munhu anoda kuva shamwari yenyika anozviita mhandu yaMwari.
Naizvozvo zviisei pasi paMwari. Rwisai Satani iye achakutizai.
Swederai kuna Mwari iyewo achaswederawo kwamuri. Shambai maoko enyu imi vatadzi muchenese mwoyo yenyu, imi vanhu vemwoyo miviri.
Ngaarumbidzwe Mwari naBaba waTenzi wedu Jesu Kristu! Nokuda kwengoni dzake dzakawanda takaberekwa patsva kuchitarisiro chezvirokwazvo pamusana pokumuka kwakaita Jesu Kristu kuvakafa.
imi makachengetedzwa nesimba raMwari uye nokuda kwechitendero kusvikira ruponeso rwakagadzirirwa kuburitswa pachena panguva yokupedzesera.
Nokuna iye, munechivimbo muna Mwari akamumutsa kuvafi akamupa mbiri kuti chitendero chenyu nechitarisiro zvive muna Mwari.
Makazvarwa patsva kwete nembeu dzinofa asi dzisingafi nokuShoko benyu raMwari risingafi rinogara nokusingaperi
Uyai kwaari, iye Dombo Benyu rakarambwa navanhu asi pana Mwari rakasarudzwa uye rinokosha,
Asi imi muri rudzi rwakasarudzwa, vapristi vokumba huru, rudzi runoera, vanhu vaMwari kuti muparidze mabasa anoshamisa ouya akakudaidzai kuti mubve murima muchipinda muchiedza chake chinoshamisa.
Makambenge musiri rudzi, asi iye zvino mava rudzi rwaMwari. Makambenge musina kuitirwa tsitsi asi zvino makaitirwa tsitsi.
Ivai nomugariro wakanaka mukati mevechirudzi kuti kana vakakurevai savanhu vanoita zvakaipa vazoona mabasa enyu akanaka vagorumbidza Mwari paanokushanyirai.
asi garai savaranda vaMwari.
Remekedzai vanhu vose, idanai navose nevehama. Ityai Mwari, muremekedze mambo.
nokuti chikomborero kuti munhu anotirira zvake nhamo, iye achitambudzika zvisina ruenzaniso, pari pamusana pokuti anoziva kuti kuna Mwari.
Unowana mubayiro wei kana ukatirira iwe waroverwa kuita zvakaipa? Asi kana ukaita zvakanaka iwe ugotambudzika nokuda kwazvo iwe ukatirira zvako, chikomborero ichocho pana Mwari.
Saizvozvo ndizvo zvaiitwa navakadzi vakare vatsvene vaiva nechitarisiro muna Mwari. Vaizvishongedza nokuzviisa pasi pavarume vavo
nokuti zviri nani kutambudzikira kuita zvakanaka kana zviri izvo zvinoda Mwari pano kuita zvakaipa,
vasina kunge vateerera; Mwari paakamirira nomwoyo wake murefu, pamazuva aNowa ngarava ichavakwa, makazoponeswa vanhu vashoma vanokwana vasere chete, vakaponeswa nemvura.
Ruombeko rwakaita saizvozvo. Runokuponesai zvino, kwete nokubvisa tsvina pamuviri asi sechichemo kuna Mwari kuti hana icheneswe pamusana pokumuka kwaJesu Kristu
akaenda kudenga, zvino ari kurudyi rwaMwari. Vatumwa neveushe navanamasimba vari pasi pake.
Izvi kuti kuti, nguva yasara yamunenge muine muviri, mugare muchitungamirirwa kwete nehavi dzomuviri asi nokuda kwaMwari.
Mumwe nomumwe wenyu zvaakagamuchira chipo, chishandisiranei savanhu vakapiwa basa rezvikomborero zvakasiyana — siyana naMwari.
Wokuparidza ngaataure somunhu anotaura zvirevo zvaMwari. Anoitira vamwe mabasa ngaaite somunhu anopiwa simba naMwari kuitira kuti muna zvose Mwari arumbidzwe nokuna Jesu Kristu, muridzi wembiri nesimba narini narini Ameni.
Asi munhu akatambudzika somuKristu ngaarege kunyara asi ngaatorumbidza Mwari nezita iroro.
Chikonzero chacho ndechokuti kutongwa kwatotanga kuchitangisa nemhuri yaMwari. Zvino kana kuchitanga nesu kudai, ko kune avo vasingatendi Shoko Rakanaka raMwari zvichaperera kupi?
Saizvozvowo avo vanotambudzika sokuda kwaMwari ngavazviturire mumaoko aMwari musiki akatendeka.
Nokudaro zvininipisei pasi poruoko rwaMwari rune simba kuti nenguva yakafanira azokupembedzai zvikuru.
Ndini Simoni Pita muranda nomupositori waJesu Kristu, ndinokunyorerai imi makagamuchira chitendero chakakosha chakangoita sechedu nesimba roururami hwaMwari wedu nomuponesi wedu Jesu Kristu.
Simba rake rouMwari rakatiwanisa zvinhu zvose zvinopa upenyu uye unamati hwechokwadi pamusana pokuziva iye akatidaidza kumbiri yake nokurunako rwake.
Nenzira iyoyi akatipa zvitsidzo zvakakosha uye zvakakura kwazvo kuti nazvo mupunyuke kuora kuri panyika pamusana pehavi muchiva nomugove muumwari.
nokuti paakapiwa rukudzo nembiri naMwari Baba izwi rakauya kwaari richibva mukupenya kukuru richiti, “Uyu ndiye Mwanakomana wangu wapamwoyo wandinofadzwa naye zvikuru.”
Kunyange asina kurega kuranga nyika iya yakare asi akachengetedza Nowa muparidzi oururami navamwe vanhu vanomwe, paakaunza mafashamo emvura panyika yavanhu vasinganamati Mwari,
Mwari akasandura maguta eSodhomu neGomora kuaita dota achiatsakatisa achiaita muenzaniso wezvichaitika kuna vasinganamati Mwari.
zvikuru avo vanofarira havi dzinosvibisa uye vanoshora ukuru hwaMwari. Vanoshora nechivindi vembiri vaya vachida vachiziva uye vasingatyi,
Vanoramba, ivo vachiziva zvavo kuti matenga akavapo kare kare nokuda kwezwi raMwari uye kuti pasi pakaitwa pachibva mumvura uye pachishandiswa mvura.”
Asi nezwi rimwechetero denga napasi zviripo iye zvino, zvakachengeterwa kuti zvipiswe nomoto. Zvakachengetwa kusvika pazuva rokutonga, zuva rokuparadzwa kwavasinganamati Mwari.
Zvino zvinhu zvose izvi zvazvichaparadzwa kudai, munosungirwa kuva vanhu vakaita sei pakuva vatsvene napakunamata kwenyu Mwari
makamirira muchisuwira kuuya kweZuva raMwari richazoita kuti matenga abatire moto agoparadzwa uye zvomudenga zvichanyungurutswa nomoto.
Iri ndiro shoko ratakanzwa kwaari ratinokuparidzaiwo rokuti, Mwari chiedza uye kuti maari hamuna kana rima zvaro.
Kana tikati hatitadziri Mwari tinomuita munyepi uye izwi rake harisi matiri.
Asi anochengeta shoko rake, maari rudo rwaMwari runobva rwanyatsozadzikiswa. Izvozvo ndizvo zvinobva zvatiratidza kuti takabatana naye.
1 Johani 2:14
Ndiri kukunyorerai imi madzibaba nokuti munoziva iye akanga ari pakutanga. Ndiri kukunyorerai imi vechidiki nokuti makasimba uye nokuti izwi raMwari rinogara mamuri uyezve nokuti makakunda muipi.
1 Johani 2:17
Nyika iri kupfuura pamwechete nehavi dzayo asi uyo anoita kuda kwaMwari anogara nokusingaperi.
Tarisai muone kuti rudo rwakadii rwatakaitirwa naBaba, rwokuti tinzi vana vaMwari uye ndizvo zvatiriwo izvozvo. Chinoita kuti pasi pasatizive ndechokuti hapana kumuziva.
1 Johani 3:2
Vadikanwi izvozvi tiri vana vaMwari. Zvatichava hazvisati zvavakuonekwa. Asi zvatinoziva ndezvokuti kana iye ozviratidza, tichange takafanana naye nokuti tichamuona sezvaari.
Munhu anoita chitadzo, ndowaSatani nokuti Satani aingotadzira Mwari kubvira pakutanga. Chikonzero chakaita kuti Mwanakomana waMwari azviratidze ndechichi chokuti aparadze mabasa aSatani.
1 Johani 3:9
Hapana munhu akaberekwa naMwari anoita chitadzo nokuti mhodzi yaMwari inogara maari. Haakwanisi kutadzira Mwari nokuti akaberekwa naMwari.
1 Johani 3:10
Izvozvi ndizvo zvinotiratidza pachena kuti vana vaMwari ndavapi uye kuti vana vaSatani ndavapi. Munhu wose asingaiti zvakarurama, haasi waMwari ndizvo zvimwechetezvo nomunhu asingadi hama yake.
kana hana dzedu dzotipomera mhosva, nokuti Mwari mukuru pane hana dzedu uye anoziva zvose.
Vadikanwi kana hana dzedu dzisingatipi mhosva tine chivimbo pamberi paMwari.
Vanangu imi muri vanhu vaMwari, imi makatovakurira Nokuti iye ari mamuri mukuru kupinda satani ari pasi pano.
Vadikanwi ngatidananei nokuti rudo runobva kuna Mwari. Munhu wose ano rudo akaberekwa naMwari uye anoziva Mwari.
Asina rudo haazivi Mwari nokuti Mwari rudo.
Rudo rwaMwari rwakaratidzwa pakati pedu nezvizvi zvokuti Mwari akatuma Mwanakomana wake mumwechete pasi pano kuti tiraramiswe naye.
Urwu ndirwo rudo sezvarwuri izvi kwete rwokuti isu ndisu takada Mwari asi rwokuti iye ndiye akatida. Akatitumira Mwanakomana wake kuti ave chibayiro chokupfupira zvitadzo zvedu.
Vadikanwi, kana Mwari akatida zvakadai isuwo tinofanira kudanana.
Hapana munhu ati amboona Mwari asi kana tichidanana, Mwari anogara matiri uye rudo rwake matiri runobva rwazadziswa zvokuperera.
Munhu wose anopupura kuti Jesu Mwanakomana waMwari, Mwari anogara maari iye anogarawo muna Mwari.
Saizvozvo tinoziva uye tinotenda murudo rwaMwari kwatiri. Mwari rudo; munhu anogara murudo anogarawo muna Mwari Mwariwo anoramba ainaye.
Kana munhu achiti anoda Mwari asi achivenga mumwe wake, munyepi nokuti asingadi mumwe wake waanoona, haangakwanisi kuda Mwari waasati amboona.
Mutemo watinawo unobva kwaari ndouyu unoti: Munhu anoda Mwari anofanirawo kuda mumwe wake.
Munhu wose anotenda kuti Jesu ndiye Kristu, mwana waMwari. Munhu anoda mubereki anodawo mwana waanobereka.
1 Johani 5:2
Chatinoziva nacho kuti tinoda vana vaMwari, kuda Mwari nokuteerera mitemo yake.
Kuda Mwari kunoreva kuchengeta mitemo yake uye mitemo yake hairemi
1 Johani 5:4
nokuti mwana wose waMwari anokunda nyika. Chinhu chinokunda pasi ndechichi, chitendero chedu.
Ndiani anokunda pasi kana asiri uyo anotenda kuti Jesu Mwanakomana waMwari.
1 Johani 5:9
Kana tichigamuchira uchapupu hwavanhu, ko kutozoti hwaMwari, hukuru kupinda hwavanhu. Ihwohwu ndihwo huchapupu hwaMwari hwaakaita kuMwanakomana wake.
Munhu anotenda muna Mwanakomana waMwari ano uchapupu ihwohwo maari, uyowo asingatendi muna Mwari anomuita munyepi nokuti anenge asina kutenda muuchapupu hwaakaita kuMwanakomana wake.
1 Johani 5:11
Uchapupu hwacho ndohwuhwu hunoti: Mwari akatipa upenyu husingaperi upenyu ihwohwo huri muMwanakomana wake.
1 Johani 5:12
Munhu anenge ana Mwanakomana ano upenyu anenge asina Mwanakomana waMwari haanawo upenyu.
1 Johani 5:13
Ndiri kukunyorerai imi munotenda muzita roMwanakomana waMwari kuti muzive kuti muno upenyu husingaperi.
1 Johani 5:16
Kana munhu akaona mumwe wake achiita chitadzo chisingaurayi anogona kumunamatira. Mwari anobva apa mutadzi iyeyo upenyu kwete anenge apara chitadzo chinouraya. Kune chitadzo chinouraya. Handisi kuti munhu anamatire mumwe panaizvozvo.
1 Johani 5:17
Kuita kwakaipa kwose chitadzo. Asi kune chitadzo chisingaurayi. Tinoziva kuti munhu anenge ari mwana waMwari haaiti chitadzo.
Tinoziva kuti tiri vanhu vaMwari. Pasi pose pari mumaoko omuipi uya.
Asi tinoziva kuti Mwanakomana waMwari akauya uye akatipa kunzwisisa kuti tizive iye wechokwadi. Isuwo tiri muna iye wechokwadi. MuMwanakomana wake Jesu Kristu iyeyu ndiMwari wechokwadi uyezve iye upenyu husingaperi.
1 Johani 5:21
Vanangu chenjererai vamwari vasirivo.
2 Johani 1:9
Ani naani anowedzera zvomusoro wake asingarambe ari mune zvinodzidziswa naKristu, haana Mwari. Munhu anoramba ari mune zvinodzidziswa naKristu ana Baba naMwanakomana.
2 Johani 1:13
Vana vomunun'una wenyu, akasarudzwa naMwari vanokukwazisai.
Ivowo vakapupura nezvorudo rwako kusangano. Chingave chinhu chakanaka kuvabatsira kuenderera mberi nerwendo rwavo nomutowo unofadza Mwari.
3 Johani 1:11
Mudikanwi, usatevedzere uipi asi tevedzera zvinhu zvakanaka. Munhu anoita zvakanaka munhu waMwari. Anoita zvakaipa haana kuona Mwari.
Ndini Judha muranda waJesu Kristu munun'una waJakobho ndinokunyorerai imi makadaidzwa, vapamwoyo paMwari Baba imi makachengeterwa Jesu Kristu.
kuzotonga vanhu vose nokuzopa mhosva vasiri vatendi vaMwari, mhosva yezviito zvavo zvose zvisina Mwari zvavakaita namaitiro asina Mwari nemhosva dzose dzehasha dzaiitwa kwaari navasiri vatendi.
Vakati kwamuri: “Mumazuva okupedzisira kuchava navadadi vanotevedza mapangiro avo asina zvaMwari.”